Ekwesịrị ime ncheta obubu ọnụ na Halacha maka ncheta oke mbibi ahụ? (Ogidi 4) - Rabbi Michael Avraham
Ekwesịrị ime ncheta obubu ọnụ na Halacha maka ncheta oke mbibi ahụ? ( Ogidi nke 4)
Nkwupụta 18	/ Tu Elul 18 - 09/2016/XNUMX 18 / 09 / 2016
Kwa afọ ajụjụ a na-ebilite maka ihe kpatara na ndị amamihe anaghị ewepụta ụbọchị ibu ọnụ ma ọ bụ ụbọchị ncheta maka ncheta Oké Mgbukpọ ahụ. Ọ bụrụ na ha buo ọnụ iji cheta ogbugbu Gedaliah Ben Ahikam ma ọ bụ nbibi nke mgbidi na nnọchibido nke Jerusalem, ọ ga-abụ na a ga-edobe ụbọchị dị otú ahụ maka ncheta Oké Mgbukpọ ahụ, nke bụ ma ọ dịkarịa ala dị ka ihe ọhụrụ na ọdachi, na maka anyị ọtụtụ ihe isiokwu na-emetụ n'ahụ. Azịza ya na-agbakarị agbagharị gburugburu ajụjụ nke ikike na ike halakhic. Ụfọdụ na-adabere n'eziokwu ahụ bụ na anyị enweghị ụlọ ọrụ tozuru etozu (Sanhedrin) nke nwere ike ịtọ ụbọchị ejigide Klal Israel. Ndị ọzọ na-ekwu na nke a bụ ịdị nta anyị (mkpụrụ nke ọgbọ ndị echetere nke ọma). Ihe ngọpụ ndị a na-ada ada nke ọma. Ọ bụrụ na enwere ike ịtọ Purim Frankfurt ma ọ bụ Casablanca, ma ọ bụrụ na enwere ike machibido mkpo ma ọ bụ smartphones ma ọ bụ televishọn, mgbe ahụ enwere ike ịnwe ikike na ikike halak nke zuru oke iji mepụta iwu ọhụrụ mgbe ọ dị mkpa.
Ọtụtụ ndị na-ahụ ya dị ka halchic Yvonne, na echere m na e nwere oke ikpe ziri ezi na ya. Enwere n'ezie enweghị mmasị ebe a site na nke ọhụrụ, ka a ghara imebi nkọwa. Egwu nke mgbanwe ma ọ bụ Zionism (na ọkwa na-esote ha ga-amalite ime ememe ụbọchị nnwere onwe na Israel). Mana achọrọ m ịnye echiche sara mbara na nke dị iche ebe a, na ajụjụ a.
Agara m ọchịchị eze ukwu
Otu ihe dị mkpa na nkuzi okpukperechi nke anyị niile bụ mkpokọta halakhah. Ekwesịrị ịgbakọ ihe niile, a na-asọpụrụ ala ahụ dum ma nwee ebe enweghị ohere. Ihe niile, na ọkachasị ihe ndị bara uru, kwesịrị ịgafe na reactor ule halachic ma bụrụkwa nke ya. Akụkụ nke ọzọ nke mkpụrụ ego ahụ bụ na enweghị ike ịnwe ụkpụrụ ma ọ bụ omume bara uru nke na-abanyeghị na halakah wee bụrụ akụkụ nke ya.
Dịka ọmụmaatụ, ọtụtụ na-achọ nkwupụta mmekọrịta ọha na eze nke halakhah. Ọ bụ halakhah social Democratic, onye isi obodo (ndụmọdụ: nke a bụ azịza kacha nso) ma ọ bụ ndị Kọmunist? Morning News na-ebipụta akụkọ na-anụ ọkụ n'obi na-ekwu ka socialist halakhah dị, na-akwado ikpe ziri ezi nkesa, onye isi obodo, ndị Kọmunist na ihe ndị yiri ya.
Echiche a na-echekarị maka ọnọdụ ndị a niile bụ na halakhah bụ n'ezie ihe n'ime ihe ndị a niile. Ọ ga-amasị m ịgọnarị echiche a na-emekarị, ma mee ya na ọkwa abụọ: a. Echeghị m na ọ ga-ekwe omume iwepụ nkwupụta na-enweghị mgbagha na okwu ndị a na ihe ndị yiri ya na halakhah. B. Ọ dịghịkwa mkpa ime nke a. Enweghị ihe mere Halacha ji nwee nkwupụta dị otú ahụ. M ga-agbalị ugbu a ịkọwakwuo ntakịrị.
A. Halkhah nwere nkwupụta echiche doro anya?
Halacha bụ nchịkọta nke ọtụtụ okwu sitere n'ọgbọ, n'ọtụtụ ebe na n'okpuru ọnọdụ dị iche iche na ndị dị iche iche. Ọ naghị enwe njikọ mgbe niile na ụgbọ elu meta-halachic. Dị ka ihe atụ agbaziri agbaziri, anyị ga-ewere mkpebi Maimonides n’ihe gbasara okwuchukwu. Ọbụlagodi na-eche na ha nwere nguzosi ike halakhim, ọ ga-abụ na ha anaghị akwado nkwụsi ike meta-halakhic. Dị ka a maara nke ọma, e nwere nghọtahie n'etiti Beit Midrash nke Rabbi Akiva na Rabbi Ishmael banyere ụzọ e kwesịrị isi na-achọ Torah (maka Rish - n'ozuzu na nzuzo, na maka RA - otutu na obere. Lee Shavuot XNUMXa na ihe yiri ya). ). Enwere ọtụtụ okwu na-ebute mmetụta halak dị iche iche na esemokwu meta-halakhic a. Maimonides na-achịkwa halakhah na ụfọdụ n'ime okwu ndị a, na dị ka m gosipụtarala n'ebe ndị ọzọ ọ na-apụta na mgbe ụfọdụ ọ na-achị dị ka echiche halak nke na-adabere n'ozizi izugbe na nke onwe na mgbe ụfọdụ ọ na-achị dị ka echiche nke na-adabere na ọtụtụ na ndị nta. Ọ naghị akwado nkwụsi ike meta-halakhic.
Echere m na halakhah n'ozuzu nwere ike inwe otu n'otu n'otu (na nke a kwa bụ okwu ikwubiga okwu ókè n'uche nke m), mana o yighị ka ọ nwere meta-halakhic ma ọ bụ ideological agbanwe agbanwe, ya bụ na ọ na-egosipụta usoro, ndị Kọmunist, onye isi obodo ma ọ bụ ndị ọzọ. sub-isiokwu socio-aconomic. Ebe dị iche iche na-eme ka anyị nweta nkwubi okwu dị iche iche, ọ bụghị ha niile na-ejikọta, ọ bụghị ha niile na-emetụta n'ọnọdụ ọ bụla, enwere nkọwa dị iche iche maka ọtụtụ n'ime ha, n'ihi ya, ọ gaghị ekwe omume ịwepụ ha mishnah n'usoro. Mgbe ụfọdụ, ọ gaghị ekwe omume ịnye mkpebi halak nke doro anya, mana ọ baghị uru meta halak nke ahaziri n'usoro.
Ọ dị mkpa ịghọta na nsogbu abụghị mgbagwoju anya, ọtụtụ isi mmalite, ma ọ bụ ihe isi ike ọ bụla n'ime ya. M na-arụ ụka na eleghị anya ọ dịghị ihe dị ka sub. Onye ọ bụla nke na-ewepụta ụdị mishnah dị otú ahụ na halakhah n'uche nke m na-eche echiche banyere ya, ma ọ bụ ma ọ dịghị ihe ọzọ na-etinye aka na arụmụka ntụgharị okwu. Dị ka ihe na-egosi, echeghị m na m maara nke ọ bụla n'ime ndị na-emeso okwu ndị a bụ ndị gbanwere ọnọdụ echiche ha n'ụzọ bụ isi na-esote ọmụmụ nke halakhah (ma e wezụga ma eleghị anya maka ọnọdụ kpọmkwem nke ha na-achọta nkwupụta doro anya nke halakhic). Mkparịta ụka dị otú ahụ anaghị aga dị ka ntọala ebumnuche mgbe agbachara akụ. Onye ọ bụla bụ onye na-elekọta mmadụ ga-ahụ na Torah socialism ya, otu ahụ ka ọ dịkwa maka onye isi obodo ma ọ bụ onye ọ bụla ọzọ na-elekọta akụ na ụba. Nke a na-ewelite enyo siri ike nke emeghị ihe n'eziokwu nke ọgụgụ isi. Ndị mmadụ na-eche na a ga-enwerịrị ọnọdụ mmekọrịta ọha na eze na tiori, ha na-achọta ọnọdụ dị otú ahụ n'ime onwe ha, wee malite ịmalite ịmepụta echiche na-enweghị atụ, okwu ndị a na-ahọrọ site na isi mmalite na ihe ndị yiri ya, iji nweta ihe siri ike na mgbagwoju anya nke anarchic.
Aga m atụkwasị ajụjụ ọzọ na nsọtụ nke okwu m: Ọ bụrụ na enweela m ihe ịga nke ọma n'iwepụ ngalaba echiche na mmekọrịta akụ na ụba n'usoro na halakhah, nke ahụ ọ ga-amanye m? Eziokwu ahụ bụ na ụfọdụ iwu na-adabere n'ụfọdụ echiche gbasara mmekọrịta ọha na eze na akụ na ụba adịghị amanye m iwu ịnakwere ya. Enwere m ike itinye aka na itinye iwu ndị a (ọ bụrụ n'ezie na ha na-ejikọta) na-enweghị ịnakwere echiche dị n'okpuru. Ihe ọ pụtara bụ na ọ bụrụ na echiche a nwere nkwubi okwu ndị ọzọ na-edobeghi na halakhah dị ka njide - anaghị m eche na ọ bụ iwu na ọ bụ ha. Kachasịa m nwere ike ịsị na mụ onwe m nwekwara enweghị nkwekọrịta meta-halachic. egosila m na m na-akpakọrịta n'okwu a, mba?
Ọ dị m ka ọ bụrụgodị na halakhah nwere ọchịchọ n'akụkụ ndị a, nkwupụta eziokwu kachasị m nwere ike ikwu banyere ya bụ na halakah chọrọ ka anyị na-egosipụta ezi uche na ime ihe n'ụzọ ziri ezi na ezi uche. Site ugbu a gaa n'ihu, onye ọ bụla ga-ekpebiri onwe ya ihe ezi uche dị na ya na ihe ezi uche dị na ya wee chepụta echiche nke mmekọrịta ọha na eze na akụ na ụba. Echiche a bụ uche nke Torah na Halacha site na ya. Ma nke a bụ n'ezie naanị na ọkwa mbụ, ọ bụrụhaala na anyị na-eche na ozizi ahụ nwere n'ezie ọchịchọ nke anyị na mpaghara ndị dị otú ahụ. Ugbu a, anyị ga-aga n'ihu na ọkwa nke abụọ.
B. Kwesịrị inwe ọnọdụ echiche doro anya na tiori?
Ugbu a, anyị ga-ajụ onwe anyị ihe mere ma ọlị na-eche na e kwesịrị inwe echiche echiche na tiori na ajụjụ ndị a? Aghọtaghị m nke a halakic imperialism, na nke kacha mma nke ikpe m, ọ dịghị ejide mmiri. Ọ dịghị ọnọdụ dị otú ahụ ma ọ bụ ekwesịghị ịbụ. Ọ bụghị naanị n'ihi na halakhah na-eme ka ọ ghara ịnagide ajụjụ ndị a, ma ọ bụ n'ihi na ọ na-esiri ike wepụ ọnọdụ na ya n'ihi ihe isi ike dị iche iche (ibid.), Ma eleghị anya n'ihi na ọ (= mkpokọta halakhic?!) ahọrọkwa (ikekwe n'amaghị ama). ) ịghara itinye aka na ha ma ghara ikpebi na ha. Ọ naghị ahụ ha dị ka àgwà ya, ya mere m na-ahapụ ha n'ógbè ya.
Ọ ga-amasị m ịnye akwụkwọ edemede ọzọ maka nke anabatara. Anyị niile bụ mmadụ, ma akụkụ nke otu mmadụ bụ ndị Juu. Onye Juu bụ onye mbụ na onye Juu, dị ka Muharram Tzitzaro Zatzokal kwuru: "Ọ dịghị ihe mmadụ bụ onye mba ọzọ" (ibid., Ibid.). N'otu oge na nkewa a n'etiti ala abụọ ahụ, ọ pụkwara ikewa ụwa bara uru (ndị Juu !?) n'ime ala abụọ: 1. Ala nke eluigwe na ala, nke nwere ụkpụrụ zuru ụwa ọnụ n'otu aka na onye ọ bụla n'otu n'otu. ọzọ. 2. The akpan akpan halakhic ala maka ndị Juu.
Ala nke mbụ nwere ụkpụrụ ndị na-adịghị mkpa ka etinyere na Halacha. Ụfọdụ n'ihi na ha na-ekekọta ihe niile dị n'ụwa ma ọ bụghị naanị ndị Juu (ụwa nile) na ụfọdụ n'ihi na ịdị adị ha ga-emerịrị n'afọ ofufo na n'otu n'otu na ọ bụghị n'otu ụzọ ahụ maka anyị niile dị ka achọrọ na mpaghara halakhic.
A maara egwuregwu a site n'aha rabaị si Ponivez bụ onye kpọgidere ọkọlọtọ n'elu ụlọ nke Ponivez yeshiva na Bnei Brak kwa ụbọchị nnwere onwe ma ọ gwaghịkwa arịrịọ, ma o kwughị otuto. Mgbe Chineke kwuru banyere ya na ọ bụ onye Zayọn dị ka Ben-Gurion, Ben-Gurion ekwughị otuto ma ọ bụ rịọ arịrịọ. Ọtụtụ ultra-Orthodox m nụrụ na-atọ ụtọ nke ukwuu site na njakịrị a na-efu ndị nzuzu na ndị Zionist ọjọọ, mana echeghị m na ha abanyela n'ime omimi nke ihe ọ pụtara. Nzube nke rabaị ahụ bụ ịsị na ọ bụ onye Zayọn nke ụwa, dị ka Ben-Gurion. Zionism ya abụghị okpukpere chi, mana uru mba, ya mere ọ na-etinye aka na ya ọbụna na-abanyeghị na halkhah. Ụbọchị nnwere onwe bụ ezumike mba ụwa nke onye rabaị nke Ponivez na-eme, na o nweghị mmasị n'inye ya àgwà okpukpe na ịkwado ya na ụkpụrụ halakhic.
Laghachi na Ụbọchị Ncheta Oké Mgbukpọ
Taa, ndị Izrel na-echeta Oké Mgbukpọ ahụ n’ụzọ dị iche iche, bụ́ ndị e debere ụfọdụ n’ime ha n’iwu na omume ọha mmadụ, ụfọdụ n’ime ha bụkwa ndị mmadụ n’otu n’otu. Ụzọ ndị a dị ka ndị a na-adị m ka ihe na-eju afọ, ọ dịghịkwa m mkpa ma ọ bụ ihe kpatara m ga-eji kwado ha na ụkpụrụ halakhia, ọ bụrụgodị na taa e nwere òtù tozuru oke nwere ike ime ya. Ha bụ nke mbụ n'ala nke abụọ a kọwara n'elu, na ọ dịghị ihe mere ịkwaga ha na nke abụọ. Ụbọchị Ncheta Oké Mgbukpọ bụ ụbọchị mba nke na-enweghị àgwà okpukpe, ọ dịghịkwa ihe dị njọ na nke ahụ. Ọ dịghị atụfu uru ya, ọ bụghịkwa eziokwu na ihe ọ bụla bara uru ga-etinyerịrị na halakic ma ọ bụ ọbụna usoro okpukpe.
N'otu aka ahụ, n'ụbọchị nnwere onwe, m na-ekwu otuto nye Chineke ma too Chineke, ma anaghị m ahụ ya dị ka ụbọchị nke okpukpe dị mkpa na n'ezie ọ bụghị halakhic. Ihe ọ pụtara bụ mba, ma mụ onwe m dịka onye Zionist nke ụwa (dị ka Rabbi nke Ponivez na Ben-Gurion) sonyere ya na ndabere a naanị. Anaghị m ekwu Hillel n’ihi na onye isi Rabbinate ekpebiela na a ga-ekwu Hillel, nke a abụghịkwa naanị n’ihi mmekọrịta m maara nke ọma na ụlọ ọrụ a. M na-ekwu otuto n'ihi na echere m na ọ dị mma ma dị mma ime ya. Nke a bụ ụzọ m dị ka onye okpukperechi isi kwupụta ọnọdụ mba m.
Ya mere, gịnị bụ n'oge gara aga?
N'oge gara aga, ha kwadoro uru ọ bụla na ọrụ bara uru ọ bụla dị na halakah. Ndị amamihe na ụlọikpe bụ ndị na-edobe ụbọchị obubu ọnụ na ọṅụ na oge anyị. Ma echere m na ọ bụ n'ihi ọnọdụ arụrụ arụ nke na-enweghị eze n'Izrel. Onye dere okwuchukwu nke rabaị na-ekwu maka usoro ọchịchị abụọ yiri ya, eze na ụlọikpe. N'ihi na ihe ụfọdụ na isi iyi nke Sages fọrọ nke nta ka ọ dịghị ndumodu nke usoro eze hụrụ. Ụlọ ikpe na-arụzi okporo ụzọ n'oge (sub-MOC), nke pụtara na ha bụ Ministry of Transport. Ha na-emezigharị ụkpụrụ na guzobe usoro, iwu nke ịtụ vootu n'ime obodo na-ekpebi site halakhah wee pụta na Shulchan Aruch. N'ezie, ha chọkwara nkwenye nke onye dị mkpa (= onye na-ekpe ikpe). Mana echere m na ọ bụ n'ihi na e hiwere Toshba'ap n'oge na-enweghị eze n'Izrel, na ikike ọchịchị ụwa na-esi n'aka eze gaa n'oké BID. Ya mere ndi-isi Sanhedrin sitere na nkpuru ulo Devid, n'ihi na ha jere ozi dika ndi-eze. Site na mgbe ahụ ruo taa, anyị amarala nke ọma na ọ nweghị akụkụ mba ụwa na ihe niile bụ nke ndị na-ekpe ikpe na ụlọ ikpe na akụkụ okpukperechi na nke halakhic anyị. Kama eze na-ekpebi omume anyị karịrị halakhah, BD na-eti ma taa ahụhụ n'ụzọ na-ezighị ezi. Ikike nke BID bụ ngosipụta nke ikike eze na ọchịchị mbụ.
Dị ka akụkụ nke otu ihe ahụ anyị nwetara na eziokwu na ihe niile bụ Torah na ihe niile na-aga. Na ọ dịghị ndụ mmadụ nkịtị, na n'ezie ọ dịghị ụkpụrụ, na-abụghị halakah. Na ihe niile ga-eduzi ma kpebie site n'aka ndị ikpe na ndị rabaị. Mana taa enwere ohere ịlaghachi na usoro. Ndi Israel nwere oke mba na BH (BH obughi na secularism kama na nloghachi nke ndu ndu nke anyi nile. Ufodu kporo ya dika nloghachi anyi na ogbo nke akuko). Ọ dịghị ihe mere anyị ga-eji nọgide na-arapara n'ahụ format anyị na-agba nkịtị ka dị iche iche akụkọ ihe mere eme pathologies.
N'ikpeazụ, n'adịghị ka echiche ndị na-emeri emeri, ọ bụghị nanị na ndị a dọọrọ n'agha mere ka ubi halakhah dị warara (ọ bụ ezie na nke a mekwara n'akụkụ ụfọdụ) ma gbasaa ha karịa mmụta kwesịrị ekwesị na mpaghara ndị ọzọ. Mmadụ kwesịrị ịlaghachi na-eme ihe na-adịghị hysterically nchegbu banyere ọnọdụ halakhah site imperialist na-ezo aka na ya na akụkụ ya ka o nwere n'okpuru nku ya niile oghere nke ndụ anyị. Iji kọwapụta ụmụnne anyị ndị Kraịst, ka anyị ghara ịga ọkụ mmụọ: nye iwu ihe o nwere, na eze (ma ọ bụ mmadụ) ihe o nwere.
Na nnwere onwe ikwu okwu, agọnarị Oké Mgbukpọ na "Ị gaghị echere" ( kọlụm 6 )
Iwu ihe onwunwe na Halacha na Iwu
Oke oke mbibi na ngalaba - nye Adi Ofir (Akwụkwọ Haaretz - 2001)
18 Echiche na “À kwesịrị idobe obubu ọnụ na Halacha maka ncheta oke mbibi ahụ? (Isi nke 4)
29 Elul 09 - 2016/14/53 na XNUMX:XNUMX
Ị naghị eche na ọ bụ ezie na enweghị ike ịhụ mishnah ahaziri n'usoro na Halacha dị ka a na-emepụta ya n'ọgbọ, mmadụ nwere ike ịhụ otu ma ọ dịkarịa ala na oyi akwa nke Torah edere? Ahụrụ m n’akwụkwọ gị ka Chineke na-akụ dice na ị na-ekwu na Baịbụl abụghị maka ụkpụrụ omume kama ọ bụ banyere ụkpụrụ okpukpe. Ya bụ, dị ka okwu gị si dị (nke kacha mma nke nghọta) ndị Juu niile, e dere Torah na ọnụ Torah bụ nke oyi akwa na-apụta na normative ndụ mmadụ na-adaba na udi nke "okpukpe". M na-ajụkwa ihe bụ udi nke "okpukpe", kedu ihe ọ pụtara? Naanị ihe aka ike na-enweghị mgbagha ọ bụla maka onye na-akwado ya? Na onye ọ bụla nke na-eche na e nwere isi ihe na mitzvos apụtaghị na a ga-etinye ha n'ogo nke na-edozi ma dị mkpa maka mmadụ / ọha mmadụ / mmadụ? Na nke ahụ, dịka ọmụmaatụ, ọ gaghị ekwe omume ịchọta site na mitzvah nke ụkpụrụ akụ na ụba shemita dị ka Jabotinsky mere?
Ọ dị ka ịkwaga ebe a kwesịrị ịga n'ihu otu nzọụkwụ n'ihu. N'anya m, ọ bụghị nanị na ndọrọ n'agha mere okpukpe nke alaeze ukwu kamakwa o kere ụdị okpukperechi, nke na-adịghị na Bible. E nyere iwu ndị ahụ maka ọdịmma mba nke mbụ na nke kachasị "ime ya n'etiti ala ahụ." Echere m na a ga-ejikwa ọnụ ọnụ anyị na-ejide ugbu a dịka ị na-ekwu ka a na-emeso Ụbọchị Oké Mgbukpọ taa, na ọkwa mba.
Ọ ga-amasị m maka nkọwa gị.
Echere m na mbụ eziokwu adịghị ahụ. Mgbalị ndị a na-eme enweghị nkwenye n'ezie. Ọ dị mkpa ka ị ghara ileghara eziokwu anya na idobe ya n'ọchịchọ anyị (ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ọ dị mma ma dị mma). Echere m na ọbụna na Torah e dere, ọ bụ nnọọ amorphous. N'ezie ụkpụrụ eluigwe na ala nke onye ọ bụla kwenyere na ị ga-ahụ ebe niile. Ma ọmụmụ nke Torah ma ọ bụ Halacha adịghị, n'echiche m, gbanwee ihe ọ bụla na echiche ndị ị chepụtara onwe gị (na nke a bụkwa eziokwu n'echiche m, na ndị mmadụ na-achọta ihe ha chọrọ).
Ekwenyere m na na Sages enweghị ọdịiche dị n'etiti omume na okpukperechi na ikekwe na Rishonim. N'echiche nke ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị kere ọdịiche a (na n'ozuzu, akụkọ ihe mere eme nke halakhah bụ ịmepụta ọdịiche ndị na-adịbeghị mbụ. Nke ikpeazụ na-eme echiche ndị na-adịghị na mishnah na ihe ndị ọzọ). Ma n'uche nke m, ọ bụ nkwupụta na ụwa na-aga n'ihu (ma ọ bụghị ịlaghachi azụ). Anyị ghọtara ugbu a na e nwere ụdị ụkpụrụ abụọ, nke ọtụtụ ndị nna ukwu anyị achọpụtala n'etiti ha. Ihe na-egosi na nke a (nke na-enyere anyị aka ịghọta ihe ha na-aghọtaghị) bụ na anyị na-ahụ taa na ọ ga-ekwe omume inwe omume ọbụna n’ejighị okpukpe kpọrọ ihe. Ya mere, gịnị mere ị ga-eji chee na nkwenye okpukpe bụ maka ebumnuche okpukpe? Site n'echiche a, ọ dị oke egwu taa.
Banyere nkọwa nke ebumnuche okpukpe, ị na-eche na ọ nweghị ụkpụrụ karịa ụkpụrụ omume. Nke a bụ echiche nke anaghị m ahụ ihe ndabere, na ọ bụghị mgbe ị na-ele Torah na Halacha anya. Maka akụkụ dị ukwuu nke ihe ọ dị m ka enweghị ike ịchọta ezi uche nke omume. Yabụ kedu ihe kpatara were were na onye ọ bụla bụ maka omume ọma? N'uche nke m enwere ebe a ọzọ na-arapara n'ọchịchọ nke obi na ileghara eziokwu anya.
1. O doro anya na alibi de Akwụkwọ Nsọ nnyocha, ma ọ bụrụ na Akwụkwọ Nsọ bụ ma dị iche iche strata na-anọchi anya dị iche iche ụlọ akwụkwọ na ụwa echiche, ọ dịghị ihe na-ekwu banyere. Ma ọ bụrụ na anyị anabata akụkụ mkpughe nke Akwụkwọ Nsọ, n'ezie n'echiche nke m, enwere ike ịmepụta ma ọ bụ mee ka ọnọdụ ụfọdụ dị mma n'ihi ọmụmụ nke amaokwu ndị ahụ. Dịka ọmụmaatụ, njikọ nke Akwụkwọ Nsọ na ndị eze bụ okwu nke m chere na enwere ike ịkọwa ya site na nyocha nkọwa siri ike. Dị ka ihe atụ, echere m na Maimonides, bụ́ onye hụrụ akwụkwọ ozi e mere eze n’Izrel n’ikpe e kpere, leghaara ihe isiakwụkwọ ahụ dum pụtara n’ụzọ dị mfe. Anyị nwere ike ọ gaghị enwe ike ime ka onye ọzọ kwenye bụ onye ji n'aka na ọnọdụ ya (dị ka anyị nwere ike ghara ime ka Dawkins kwenye) ma n'ezie, echere m na ọmụmụ Akwụkwọ Nsọ nwere ike iduga nghọta ọhụrụ na ọtụtụ okwu. N’ozuzu echiche m bụ na e kwesịghị inwe ihe mgbagha n’etiti omume mmadụ na ihe e dere na Torah ka Abraham tikuru n’ihu mbibi nke Sọdọm. Ya mere echere m na n'ezie Akwụkwọ Nsọ ezughị oke iji mepụta echiche omume site na mmalite mana ọ na-enyere aka.
2. Aghọtaghị m ka eziokwu ahụ bụ na ọ ga-ekwe omume ịdị na-akpa àgwà na-enweghị nkwa okpukpe na-egosi na e nwere ụzọ abụọ. Anaghị m ekwu na ọ bụ naanị okpukpe bụ omume mana n'ezie na ebumnuche nke mitzvos bụ otu ụdị. Eziokwu ahụ bụ na ọ bụghị mgbe niile ka mmadụ na-enwe ike ịghọta uto nke mitzvos anaghị achọ ka a nabata ụdị "okpukpe". Mgbe ụfọdụ anyị na-enweghi ihe ndekọ akụkọ ihe mere eme iji ghọta megide ihe dị mkpa pụtara ma nke a apụtaghị na ihe kpatara omume adịghị adị. Karịsịa ebe ọ bụ na ị nyebeghị m nkọwa dị mma nke "uru okpukpe." N'ebe a, m nwere ike iche na e nwere a "okpukpe" Atiya na m na-amaghị ihe bụ "zuo ezu oghere".
1. E kwesịghị inwe esemokwu, mana ajụjụ a bụ ma enwere ike ịmegharị ya. Mmadụ ọ̀ pụrụ ịchọpụta ọmụmụ Bible nke ọ na-adịghị anakwere ma gbanwee echiche ya mgbe ọmụmụ ihe ya gasịrị. Echeghị m na nke ahụ na-eme. Abarbanel bụ́ onye gọnahụrụ ọbụbụeze chọtara echiche ya n’ime Bible, Maimonides onye na-agọnarịghịkwa tụụrụ ime ya. Otú ahụ ka ọ dịkwa taa.
O doro anya na ọmụmụ ihe ọ bụla na mpaghara ọ bụla na akwụkwọ ọ bụla ma ọ bụ ihe nkiri na-emepe ajụjụ ma nwee ike ịgbanwe echiche. Ma a ga-eme mgbanwe ahụ n'ime usoro ime ọ bụghị site n'ikike nke Akwụkwọ Nsọ (na ebe ọ bụ na achọpụtara m nkwubi okwu dị iche ebe ahụ, m na-amanye onwe m ịgbanwe ọnọdụ m n'okwu ụfọdụ).
2. Enweghị m nkọwa nke uru okpukpe. Mana dịka ọmụmaatụ, a na m ekwu na ebubo maka nwunye Cohen bụ onye nwara ikewapụ di ya adịghị ka m bụ ebubo maka ebumnuche omume. Nzube ya bụ ichekwa ịdị nsọ nke ọkwa nchụ-aja. Nke a bụ ebumnuche okpukpe na omume rụrụ arụ. Ọbụna mmachibido iwu iri anụ ezi adịghị ka m mmachibido iwu nke ebumnuche ya bụ omume. A pụrụ ikwu mgbe nile na e nwere nzube omume nke anyị nile na-aghọtaghị. Nke a bụ okwu efu, ahụghịkwa m ihe mere m ga-eji chee otú ahụ.
Arụmụka m bụ na ọ bụrụ na ebumnuche nke mitzvos bụ omume, mgbe ahụ mitzvos dị oke egwu (opekata mpe taa). A sị ka e kwuwe, enwere ike nweta ihe mgbaru ọsọ omume ọbụna na-enweghị ha (na nke a ka m wetara ihe àmà sitere n'aka ndị na-eme omume ọma bụ ndị na-ejighị halak). Yabụ kedu ihe ọ bụ idebe iwu? Nwee omume ọma ma zuo oke.
1. Mana taa enwere m ike ịbịa kpebie n'etiti esemokwu dị n'etiti Maimonides na Abarbanel wee chọpụta na echiche Maimonides dị ka ọ dịpụrụ adịpụ na ịdị mfe nke amaokwu ndị dị ka ngwaọrụ nkọwa nke ọmụmụ Akwụkwọ Nsọ. Nke a n'ezie apụtaghị na m na-amanye onwe m na-akpaghị aka ma dị ka ị kụziiri anyị (dị ka m ghọtara ya) dị ka usoro synthetic si dị, ọ dịghị ihe dị ka mgbanwe nke ọnọdụ kpọmkwem site na arụmụka ma ọ bụ naanị site na usoro okwu. Ya mere echere m na ịtụgharị amaokwu ndị ahụ na nkwenye na nke a bụ ederede nwere ikike nwere ike na njedebe nke usoro ahụ kpebie ịkwado mgbanwe nke nghọta.
2. Ọzọ, Aghọtaghị m ihe kpatara ịmepụta ụdị nke na-enweghị nkọwa bụ obere ihe efu karịa arụmụka m na anyị enwetaghị uru niile nke iwu. "Uru okpukpe" ruo ugbu a apụtaghị ihe ọ bụla nye m, n'ezie yiri ka jupụta oghere. Banyere ajụjụ nke ihe mere ị ga-eji debe mitzvos ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume inwe omume na-enweghị mitzvos. Echere m na ọ ga-ekwe omume ịza ma na site na mitzvos ọ ga-ekwe omume inwekwu omume, ma ọ bụ na nke a bụ ihe ndị amamihe pụtara mgbe ndị ọkachamara kwuru "mitzvos bụ ihe efu maka ọdịnihu ga-abịa". Mụ onwe m na-eche na n'ezie ụfọdụ n'ime mitzvos agwụla ọrụ ha akụkọ ihe mere eme dị ka ịgba ohu na ụfọdụ ka na-eche maka mmezu ha.
1. Mgbe ahụ kpebie. Ajụjụ bụ gịnị kpatara na ọ naghị eme ka ndị na-eche echiche dị iche na gị kwenye? Ya mere enwere m obi abụọ banyere ikike imepụta echiche na ụkpụrụ sitere na Akwụkwọ Nsọ na Halacha. N'anya gị ọ dị ka Abarbanel mana o doro m anya na ọ bụ maka na ị bụghị eze. Gwa ndị eze okwu na ị ga-ahụ na ha na-enye akara ma na-egosipụta echiche dị iche (nke megidere ihe ị na-ede n'echiche m nwere ebe). Ma ajụjụ eze bụ ihe atụ ọjọọ, n'ihi na Torah na-ezo aka na ya nke ọma. M na-ekwu maka ajụjụ halak na echiche na-apụtaghị ìhè. N’otu aka ahụ, ị ​​nwekwara ike wetara m na Torah na-akwado okwukwe na Gd.
Were ya dị mfe, nke bụ eziokwu bụ na ọ dịghị eduga ná mgbanwe na nghọta.
2. Eziokwu ahụ bụ na ihe enweghị nkọwa apụtaghị na ọ dịghị uru na-ekwu banyere ya (ma ọ bụghị dị ka positivists). A maara okwu Muharram R. Piersig n'akwụkwọ ya Zen and the Art of Motorcycle Maintenance na nkọwa nke echiche nke àgwà, na n'eziokwu na ndị Gris (ndị ajọ omume) kụpụrụ ụbụrụ anyị n'eziokwu na a ghaghị ịkọwa ihe niile. . Ọ bụrụ na ị chere na echere m na ị ga-abịa na nkwubi okwu na ị maghị otú e si akọwa echiche nke uru omume ọma. Enweghị echiche bụ isi nke a pụrụ ịkọwa. Ewetara m unu ihe atụ nke uru okpukpere chi: ịdị nsọ nke ọkwa nchụ-aja, ịdị nsọ nke ụlọ nsọ na ihe ndị yiri ya.
Ị wetara ihe atụ nke ịgba ohu, ma i mere onwe gị ndụ dị mfe. Ana m ekwu maka ọtụtụ Torah na Halacha. Ha emezughị ọrụ ha, ma ọ dịghị mgbe ha bara uru. Yabụ kedu ihe ha bụ? Ị na-ekwu nkwupụta okwu na site na mitzvos mmadụ nwere ike bụrụ omume ọma. Ahụghị m ihe ọ bụla gosiri nke ahụ. Ọ bụghị na nyocha nke mitzvos na atụmatụ (ọtụtụ enweghị ihe jikọrọ ya na omume), ma ọ bụ na nleba anya nke eziokwu n'onwe ya. Ya mere, n'uche nke m, ndị a na-agbawa obi na ọ bụghị echiche ziri ezi banyere eziokwu.
29 Elul 09 - 2016/14/54 na XNUMX:XNUMX
Dị ka m maara, ị na-ahụ nguzobe nke steeti dị ka ihe omume okike (na-enweghị enyemaka nke Chineke). Ọ bụrụ otú ahụ, gịnị bụ otuto a ga-ekwu n’okwu a?
N'ezie, aghọtara m na taa ọ dịghị itinye aka na Chineke n'akụkọ ihe mere eme, ọ bụghị nanị na nguzobe nke steeti (na ọbụna ma ọ bụrụ na enwere m enweghị ụzọ isi mara ebe na mgbe ọ na-eme). Ya mere, mgbe ihe obi ụtọ mere (= "ọrụ ebube"?) Ọ bụ naanị ohere ikwu otuto dịka nkwupụta nke okike nke ụwa na ihe okike m.
29 Elul 09 - 2016/14/55 na XNUMX:XNUMX
Enweghị m ike ịghọta n'echiche gị, gịnị kpọmkwem bụ ọdịiche dị n'etiti ntinye aka na "Dina Damlakhuta Dina" bụ nke a na-agbanye ma dị irè na halakhah ọbụna n'okpuru ọchịchị nke ndị Jentaịl nọ n'ala ọzọ, na ọnọdụ taa, ikekwe ị pụtara na nke dị n'elu. iwu dị irè naanị maka iwu ka elu Maka mpaghara ndị ọzọ na ụkpụrụ ụwa niile na ihe ndị yiri ya?
Aghọtaghị m ajụjụ a
M ga-ehota akụkụ nke okwu gị: “N'otu akụkụ nke otu okwu ahụ, anyị maara na ihe niile bụ Torah na ihe niile na-aga. Na ọ dịghị ndụ mmadụ nkịtị, na n'ezie ọ dịghị ụkpụrụ, na-abụghị halakah. Na ihe niile ga-eduzi ma kpebie site n'aka ndị ikpe na ndị rabaị. Mana taa enwere ohere ịlaghachi na usoro. Ndi Israel nwere oke mba na BH (BH obughi na secularism kama na nloghachi nke ndu ndu nke anyi nile. Ufodu kporo ya dika nloghachi anyi na ogbo nke akuko). Enweghị ihe mere anyị ga-eji nọgide na-agbaso usoro nke anyị maara n'ihi ọrịa akụkọ ihe mere eme dị iche iche. " Ma n'ihi na m na-arịọ: E kwuwerị, halakhah ọbụna n'oge "n'ihi mmehie anyị e mere ka anyị jee biri n'ala anyị," ọbụna mgbe ahụ, anyị nọ n'okpuru ụfọdụ ọchịchị onye mkpebi ya (nke na-esikwa na arrays n'èzí halakhah) M nwere halakhic ndaba. , dị ka ọ gụnyere na udi "Dina Damlakhuta Dina", ya mere, olee akụkụ dị ịrịba ama agbakwunyere na echiche ahụ?
Atụrụ m anya ugbu a akọwapụtala m onwe m karịa.
Aghọtara m. Ma ịchịisi n'okpuru ndị ọzọ na-enye anyị nsogbu na ihe na-adịghị mma. Ọ bụ eziokwu na Dina Damlakhuta nwere ikike halakhic, yabụ gịnị? Nke ahụ ọ pụtara na ọ dị mma ibi n'okpuru mgbidi Franz Josef? Ihe ọṅụ bụ na anyị alaghachila n'ịchịkwa ndụ anyị n'onwe anyị ọ bụghị na ọ nwere ikike halakhia.
Daalụ nke ukwuu maka ime ka ihe dokwuo anya! Ị ga-enweta iwu-nsọ na ike kpọmkwem.
29 Elul 09 - 2016/14/58 na XNUMX:XNUMX
Ọ bụrụ na obubu ọnụ bụ naanị mmemme mba, ị chere na ha gaara anwụ? Ọ̀ pụrụ n'ezie ememe a na-eme n'ógbè steeti dochie ekpere a na-ekpe n'ụlọ nzukọ ọ bụla?
Oké Mgbukpọ ahụ bụ ihe omume nke dị ike karịa n'ụzọ iri nke Tevet ma ọ bụ Gedaliah ngwa ngwa. N'uche nke m, obi abụọ adịghị ya na ụzọ kacha mma isi nyefee ya n'ọgbọ ndị na-abịa n'ihu bụ ụbọchị okpukpe nke iru uju, nke bụ ụbọchị ibu ọnụ. Mmadụ ole n'ime ndị enyi gị (okpukpe) maara Eze Jihu? Ma ole ndị maara Gedalia Ben Ahikam?
Ihe a ga-eme? Ndị Juu na-echeta nke ọma ihe ndị metụtara nri, ma ọ̀ bụ ememe ma ọ bụ ibu ọnụ. Akụkọ ihe mere eme gosiri na ọ na-arụ ọrụ nke ọma karị. Na ihe àmà na-egosi na ọ dịghị nke ọ bụla n'ime ememe mba ndị Juu lanarịrị (Megilat Ta'anit) ma e wezụga ụbọchị ndị a nabatara na Halacha.
Nke a bụ nkwupụta akụrụngwa. Ana m emeso ajụjụ nke ma halakhah chọrọ ma ọ bụ na-atụ anya ịtọ ụbọchị ncheta dị otú ahụ. Ajụjụ nke ihe dị irè karị dị iche na a ga-atụle ya iche.
Banyere ajụjụ nke abụọ, echiche m bụ na ọ bụrụ na ha echefu - ha ga-echefu. Mgbe ụfọdụ, ihe omume ndị ahụ na-adịte aka ma ghara ịdị mkpa (ọ dịghị m ka ọ dị m mkpa taa icheta Gedalaya ma ọ bụ Jihu). Okwu gị gbadoro ụkwụ na nghọta zuru ebe niile na okpukperechi na halakhah kwesịrị inye ọrụ maka ụkpụrụ mmadụ nke mba na nke ụwa. Ekwetaghị m na nke ahụ.
29 Elul 09 - 2016/15/01 na XNUMX:XNUMX
Anụwo m ọtụtụ ihe banyere gị site n’ụbọchị nke ozizi gị na Jerusalem site n’aka ndị enyi Rabaị Uriel Eitam.
Eji m ịnụ ọkụ n'obi gụọ akụkọ gị maka ịtọ ngwa ngwa maka ụbọchị Oké Mgbukpọ, ekwenyere m na ọtụtụ ihe.
Anụla m ọtụtụ ugboro site n'aka Rabbi Amital nwụrụ anwụ: "Ọ bụghị ihe niile bụ echiche Torah." "Ọ bụghị ihe niile kwesịrị ikwu banyere Da'at Torah" na ndị ọzọ
Ṅụrịa ọṅụ n'okwu gị gbasara otuto n'ụbọchị nnwere onwe.
Olee otú o si kwe omume ikwu otuto maka ọrụ ebube mere ma kwuo na o nweghị ihe ọ pụtara n’okpukpe? Ma ọ bụ, aghọtaghị m ihe ị na-ekwu.
Ọ ga -amasị m nkọwa.
Chee echiche banyere nkwupụta nke kere (iji dị iche) mgbe ị gachara ụlọ ịsa ahụ. Nkwupụta ahụ a gwara Chineke na o meghere oghere m ọ̀ nwere akụkụ okpukpere chi ya? Nri ụtụtụ m na-ekele tupu na mgbe ọ gachara ọ nwere akụkụ okpukperechi? N'anya m obodo ahụ dị ka ụlọ mposi ma ọ bụ nri ụtụtụ.
Banyere otuto maka ọrụ ebube, nke ahụ bụ ajụjụ ọzọ. Echiche m bụ na ọ dịghị ọrụ ebube taa (ma ọ bụ ma ọ dịghị ihe ọzọ ọ dịghị ihe gosiri na e nwere), na ọ dịghị ihe Chineke na-etinye aka n'ụwa ma ọlị. Mgbe ihe omume obi ụtọ mere anyị, dị ka nguzobe nke steeti, ọ bụ ihe na-akpalite ikele Chineke maka okike nke ụwa na ihe okike anyị. Ma m ga-agbasawanye na nke ahụ na Gaza (?) N'ime akwụkwọ m na-ede ugbu a banyere nkà mmụta okpukpe ugbu a.
Mana ànyị nwere ikike imezi ngozi n’onwe anyị maka ụbọchị nnwere onwe?
A ghaghị ikwurịta nke a. Ma ọ dịkarịa ala maka ụfọdụ ụzọ (Meiri) ọ bụ iwu kwadoro ikwu otuto na ọrụ ebube ọ bụla nke nzọpụta na nkwupụta, mgbe ahụ, ọ dị ka onye kwesịrị ịgọzi ọbụna na-enweghị ụkpụrụ pụrụ iche. Dị ka ngozi na-eri apụl mgbe ọ bụla anyị na-eri na-adịghị edozi ngozi na apple ọ bụla.
N'ọnọdụ ọ bụla, n'ezie, ọ dịghị ókè otuto na-enweghị ngọzi.
Ma enwere nnukwu ebe maka Sabra na ọbụlagodi na ngọzi enweghị oke. Ọ bụrụ na Israel mgbe ọrụ ebube nke Chanukah ga-asị Hallel na-agọzi onwe ha na-enweghị ụkpụrụ nke ndị amamihe, na na e nwere nsogbu na nke ahụ? Ụfọdụ n’ime ndị mbụ jikwa omenala gọzie, ma n’okwu a, a na-atụle ngọzi nke otuto n’onwe ya. Ma na nke ahụ m na-ala azụ, na na.
Ọ na-esiri m ike ịhụ mba Izrel dị ka "ọrụ."
Ndị Izrel laghachiri n’Izrel mgbe afọ 2000 gachara. Ọ dị njọ na e guzobebeghị steeti ahụ afọ iri abụọ gara aga….
Ekele steeti enwere nchịkọta akwụkwọ ozi. Ọchịchị nọọrọ onwe ya laghachiri n’ebe ụmụ Izrel nọ. A na-akpọ okwu ndị dị na Sages "ụbọchị Mesaịa."
Otuto abụghị naanị maka ọrụ ebube kama maka nzọpụta
N'ihe banyere ọrụ ebube.
Ọrụ ebube abụghị naanị imebi iwu okike kama imebi iwu nke akụkọ ntolite ma ọ bụ mgbagha.
Olee ebe ọzọ anyị rụtụrụ aka n'okwu ikpe nke ndị mmadụ gbasasịrị na nsọtụ ụwa laghachiri n'ala ha ka afọ 2000 gachara?
Na-edozi ya. Onye nrụpụta. E mere otu akwụkwọ ozi n'ime ya. Olee ihe atụ ọzọ e nwere?
Ọ̀ bughi nka ka ndi-amuma gāchọ n'ọhù-ha?
E kwuwerị, ọ bụrụ na afọ 80 gara aga, ha gaara agwa Mordechai si Morocco na Libish si Poland na ha bụ. Ụmụ ha na ụmụ ụmụ ha ga-anọkọ n’ala Izrel n’okpuru ọchịchị ụmụ Izrel, ha ga-emekwa ka ezinụlọ dịrị n’otu. Ha ga-asị na ọ dị ka ụlọ mposi?
Mgbe m jiri mba Izrel tụnyere ọrụ, ọ pụtaghị na m ga-ekwu na steeti ahụ abaghị uru ma ọ bụ ihe arụ dị ka ọrụ. M pụtara na-ekwu na steeti bụ a (dị mkpa) pụtara maka anyị, na ọ dịghị ihe ọzọ. Obi dị m ụtọ nke ukwuu na nke a pụtara na ọ dị anyị n'aka, na n'ezie ọtụtụ afọ enwebeghị, ma ahụghị m ya dị ka uru okpukpe. Ọ kachasị ọnụ ahịa mba. N’ezie ọbịbịa Mesaịa ahụ bụkwa nkwa dị ka inye mmiri ozuzo. Ụbọchị Mesaịa ahụ enweghịkwa uru okpukpe ọ bụla ebe ọ bụ na ọ dịghị ememe nke mitzvos, ma na kacha ụzọ nke ga-enye anyị ohere ịhụ ọtụtụ mitzvos (Ụlọ Nsọ, wdg). Ịba ọgaranya bụkwa ụzọ e si edebe iwu, ọ dịghịkwa eme ka akụ̀ na ụba baa uru n'okpukpe. Otu steeti bụ n'ezie ụzọ, na eziokwu ahụ bụ na ọ na-efunahụ anyị ogologo oge na anyị chọrọ ya ma taa ahụhụ na-enweghị ya bụ ihe mgbagwoju anya nye anyị (dị ka onye ogbenye nke na-ahụ ego dị ka uru n'ihi nhụjuanya ya).
Banyere ọrụ ebube, enwere mgbagwoju anya na-enye nnukwu ego. Ntinye aka ọ bụla nke Chineke n'ụwa bụ ọrụ ebube. Ntinye aka putara na ihe kwesiri ime n'etinyeghi aka (dika iwu okike siri di) Chineke tinyere aka na ihe ozo mere. Nke a pụtara imebi iwu okike. Ya bụ, ọrụ ebube. Ọ dịghị ihe Chineke na-etinye aka na okike nke na-abụghị ọrụ ebube.
Ọpụrụiche nke nloghachi anyị na Israel bụ nke m maara nke ọma ma ekwenyere m ya. Nke ahụ ọ̀ pụtara na e nwere ọrụ ebube n'ebe a? Nnukwu obi abụọ n'anya m. Nke a bụ ihe omume akụkọ ihe mere eme pụrụ iche.
Aghọtaghị m ihe dị iche. Chineke kwuru na ya ga-ezite onye amụma ma ọ bụ mee ka mmiri zoo. Anyị mere mitzvot, kedu mgbe ị ga-ekpebi ịghara izo? Mgbe otu izu gachara? otu ọnwa? ọgbọ? Kedu ka ị ga-esi kpebie ma ị ga-eme mitzvos ma ọ bụ na ị gaghị eme? Iwu ole ka a ga-eme? Ụfọdụ ndị mmadụ? Ihe niile ebe a bụ n'ezie refutable. Ọ bụ karịa ajụjụ nke echiche izugbe ọ bụghị nke mgbagha. Dịka m deworo, nkwubi okwu m na Gd adịghị etinye aka abụghị ihe nkwuputa na-enweghị mgbagha kama ọ bụ ihe mmetụta.
Aghọtara m ugbu a ihe ị na-ekwu site na "okpukpe" ya mere m ghọtara okwu maka steeti Israel na nguzobe ya enweghị ihe ọ pụtara okpukpe, a na m ahụ okwu ahụ "okpukpe" pụtara ihe sara mbara ya mere n'anya Kibbutz Galuyot wdg. nwere nnukwu ihe gbasara okpukperechi.
Ọo ya bụ t'unu nọdu l'ime ụbochi-ozhi-ọma ono, mu l'e-yekwawho l'ẹka ono, dụ l'e-me t'ọ bụru t'o doberu l'ụlo-ẹkwa-ndzukọ ono l'e-me t'ọ bya asụ iya l'e-me t'o mee.
Banyere ọrụ ebube, m na-ekerịta echiche na "echi anyanwụ ga-awa" - nke a abụghị ọrụ ebube. Nghọta nke iwu okike abụghị ọrụ ebube.
M kpamkpam na-ekerịta ọnọdụ na ihe niile abụghị ọrụ ebube, dị ka ụfọdụ ndị na-amasị ikwu.
Ma ịchịkọta ndị a dọọrọ n’agha na ịlaghachi n’Izrel mgbe puku afọ abụọ gachara, ihe omume nke na-enweghị nhata n’etiti ndị ọzọ abụghị ihe e bu pụta ụwa.
Ọ bụ eziokwu na enweghị ngafe nke oke osimiri ma ọ bụ "anyanwụ na Givon Dom" ebe a, mana enwere ihe na-ekwekọghị n'okike ebe a, pụrụ iche n'ụdị ya na ụdị ya. O doro anya na ọbụna na nke a anyị ekwenyeghị.
Ọ dị mkpa ka e kewaa arụmụka abụọ: 1. Ntọlite ​​obodo na ịchịkọta ndị a dọọrọ n'agha bụ ọrụ ebube. 2. Abụọ ndị a nwere mkpa okpukperechi. Enweghị ndabere na ụzọ abụọ ahụ. Enwere ike inwe ọrụ ebube nke na-enweghị mkpa okpukpe (dị ka imeghe oghere maka ndị na-eche na ọ bụ ọrụ ebube), na n'ezie enwere ike inwe ihe ọ pụtara okpukpe ma ọ bụghị ọrụ ebube. M na-arụ ụka na ọ dịghị ihe gosiri na nke a bụ ọrụ ebube (anomalies abụghị ọrụ ebube), ma ọ bụ na ọ dịghị ihe ọ bụla okpukpe pụtara (Abụ m Zionist ụwa). Dị ka ekwuru, ọ ga-ekwe omume ekwenyeghị na nke ọ bụla n'ime nkwupụta abụọ a iche iche ma ọ bụ na ha abụọ ọnụ.
Ọzọkwa, ọ ga-ekwe omume na obodo a ga-abụ uto nke mgbapụta anyị (inshallah), na a ga-ewu ụlọ nsọ na ya na mgbapụta ga-esi na ya pụta. Ma o nweghi ihe gbasara okpukpere chi n’anya m. Ọ bụ ikpo okwu ego emere maka ebumnuche ụwa na mkpali ụwa. Omume ndị dị otú ahụ enweghị ihe ọ pụtara n'okpukpe.
Ya bụ, ihe okpukpe pụtara, n'uche gị, chọrọ ebumnuche okpukpe?
Omume ụmụ mmadụ nwere mkpa okpukperechi naanị ma ọ bụrụ na ejiri ebumnuche okpukpe mee ya (A.A. Leibowitz). Ọ bụ ezie na mitzvos adịghị mkpa n'uche ma ọ bụ naanị na mitzvos (n'ihi na sabra nke onodu dị ka a random aha). Na karịsịa na m gosipụtara n'isiokwu ahụ (na ehihie, ọdịda ụwa na mmebi iwu) na echiche niile nke iwu chọrọ okwukwe. Ịkpọsa apiti ndị a na-emeghị n'ihi eluigwe na n'ihi mitzvah (obibi nke Israel) abaghị uru okpukpe. O nwere uru mba.
Nke a bụ n'ezie naanị ọnọdụ dị mkpa mana ezughị oke. Omume ahụ n'onwe ya aghaghị inwe uru okpukpe, na naanị Torah na-akọwa ya. Onye guzoro n’otu ụkwụ n’ihi ihe gbasara okpukpere chi nke obi gbawara agbawa enweghị uru okpukpe bara ya.
Maimonides na Mo'an dị na Pentateuch na-egosi ọdịiche dị n'etiti onye na-eme "n'akụkụ aka ya" na onye na-eme ihe n'ebumnobi na nzube.
O doro anya ihe ọkwa dị elu bụ.
Ajụjụ a bụ ka anyị ga-akọwa dị ka nke na-abụghị okpukpe omume ọ bụla mmadụ mere na-enweghị ebumnobi? Ekwenyere m n'ụkpụrụ mana nke a bụ ihe ọmụmụ mmanye maka ọtụtụ ndị sitere na Israel, a ka nwere ụfọdụ na-akwado na ụkpụrụ maka ọrụ “ọ bụghị maka onwe ya”…
N'edemede m na aguba Oakham, akọwara m na imeghị n'okwukwe abụghị maka onwe ya. Ọ bụghị omume okpukpe ma ọlị. Lee Rambam Sufach sitere na ndị eze. Onye kwere na emeghị ụma, ebe a ga-ekewa n'etiti mitzvos na ihe a na-akọwaghị dị ka mitzvah. Ịmụ ihe ziri ezi bụ ihe mara mma, ma ọ bụghị ihe eji eme ka eziokwu doo anya. Ma ọ hụrụ na ndị na-akọwa nkọwa (Rambam na Rabbeinu Yonah na ndị ọzọ) na Mishnah na Avot (Hoy Dan dum onye n'aka nri) na ha dere na-atụle nanị ebe a na ọ bụ ezi uche, megidere echiche nke ọha mmadụ. M wee dee banyere ya n'ime akụkọ BDD m na agụba Oakham.
Ọ bụrụ na ndị rabaị nwere ike kọwaa ihe ọ pụtara site n'ikwu "uru okpukpe." Ya bụ, bụ uru okpukpe naanị emume nke mitzvah n'onwe ya (nkọwa nke rabaị gbaghaara n'ihi na aghọtara m na ọ naghị amasị ya, Leibowitzian), ọ bụ ihe ọ bụla na-enyere aka n'ememe nke mitzvah mere site na okpukperechi. mmata, na gafere nke ahụ: Bụ uru okpukpe ma ọ bụrụ na ọ bụghị.
Daalụ, na nwute ma ọ bụrụ na m kpọghachite onye rabaị na mkparịta ụka ochie na nke echefuru site na obi.
Akwa udo, uru okpukpe pụtara uru n'ọrụ Chineke. Uru okpukpere chi abụghị naanị iwu ebe ọ bụ na ofufe Chineke sara mbara karịa iwu. Ọbụna tupu Shulchan Aruch, ọ nwere uru okpukpe. N’ezie, a chọkwara ọnọdụ ahụ ka e mee ya n’ihi ọrụ Chineke.
Ruo n'ókè nke m, steeti enweghị uru okpukpe n'ụzọ ọ bụla. Steeti bụ m / mkpa anyị na ọ bụghị uru. Achọrọ m ibi n'etiti ndị m na n'ala Israel nke bụ ihe riri ahụ anyị akụkọ ihe mere eme. ọ bụ ya.
N'ihe gbasara steeti halakhah na-achị, mmadụ ga-atụle uru ọ bara (ebe ọ bụ na steeti abụghị naanị ngwa maka ụmụ amaala), mana steeti dịka nke anyị enweghị uru okpukpe.
N'ihe gbasara NFM, amaghị m nke NFM ị na-achọ (ma e wezụga ido nsọ nke nwanyị). Ndị a bụ ihe abụọ dị iche iche: ọ bụ mkpa na ọ bụ uru. Gịnị ma ọ bụrụ na ihe mara mma ma ọ bụ dị mma? Ihe ndị a bụ naanị ihe abụọ dị iche iche.
Achọrọ m ịsị, kedu ihe uru okpukpe pụtara karịa nkọwa nke i debere? Gịnị kwesịrị ịbụ ihe dị iche n’etiti mitzvah, ma ọ bụ uru okpukpe, gịnịkwa na-enyere m aka ịdị adị ya? Ka ọ bụ na aghọtaghị m okwu ndị rabaị na nke a bụkwa ajụjụ efu, ebe ọ bụ na echiche a enweghị ihe ọ pụtara karịa nkọwa ya? Echere m na ọ ga-ekwe omume ịkọwa ọdịiche dị n'etiti ezi na ịma mma, ọbụlagodi na ọ bụghị n'okwu, na NPM n'etiti ha. (E.g.: Echeghị m na m ga-achọta onye ga-enye ndụ ya maka ịma mma, ebe ọ bụ na ọ dị mma ee, n'ihi na ịma mma adịghị enwe mmetụta zuru oke dị mkpa, ọ dịkarịa ala n'echiche m).
biputere Scriptum. Ị na-aghọta na steeti (dị ka m na-aghọta ya) dị ka ihe nke kpere mba uru, na ọ bụghị dị ka na-enyere ọbụna na-mitzvos. (Ọ bụ ezie na ị na-ekwu na ihe na-enyere aka idebe iwu abụghị nanị na a na-ewere ya dị ka ụkpụrụ okpukpe.) Dị ka usoro gị si dị, gịnị mere Hillel ji kwuo n'ezie? Ihe na-akpali maka nkwupụta banyere okike nke ụwa nwere ike ịbụ ọbụlagodi ma enwere m ụgwọ ọrụ ma ọ bụ akwụkwọ Harry Potter ọzọ pụta, ma ọ dịghị onye nkịtị ga-ekwu otuto maka ya. Ọ bụrụ na steeti n'ezie nwere naanị mba uru, na ọ dịghị igba egbe n'ime a usoro ofufe nke Chineke, mgbe ahụ, m n'ọnọdụ gị agaghị ewere ya dị mma ịkpalite otuto. Onye rabaị ahụ ga-enwe ike ịkọwa ihe o chere na ebee ka oke ala gafere?
Daalụ, ndo na obi ụtọ afọ ọhụrụ.
Ọ na-esiri m ike inwe mkparịta ụka n'oge dị otú ahụ.
Ọ dịghị ihe bara uru okpukpe na-abịa n'oge nke mitzvah. N'ụzọ megidere nke ahụ, mitzvah bụ ihe atụ nke ihe bara uru okpukpe. Ma ọbụna na omume omume e nwere uru na okpukpe pụtara (ostrich n'ihi na ọ bụ mmezu nke uche Chineke). N'ụzọ dị iche, imezu mkpa amaghị ihe ọ bụla enweghị uru omume ma ọ bụ okpukpe. Mmadụ chọrọ obodo otú ọ chọrọ nri ụtụtụ ma ọ bụ ụlọ. Ọ bụ mkpa dị mkpa ọ bụghị uru. Mgbe mkpa dị mkpa na ndụ gị mezuru (dị ka ịzọpụta ndụ gị) nke a bụ nnukwu ihe mere ị ga-eji na-ekwu otuto. Anaghị m ahụ ihe a na-aghọtaghị ebe a na ihe kwesịrị ịkọwa.
Steeti ọ na-ekwe ka e debe ụkpụrụ okpukpe? eleghi anya ee. Mana nri ụtụtụ na ụgwọ ọnwa na-enyekwa ohere nke a.
29 Elul 09 - 2016/15/03 na XNUMX:XNUMX
Na-esote site na mkparịta ụka ndị a dị n'elu, ọ ga-amasị m ịjụ ọtụtụ ajụjụ ndị a jụrụ m n'uche m ma site na akụkọ ahụ ma site na mkparịta ụka gbagoro na nke a.
A. Dị ka m ghọtara, Onye nwe ya ekwenyeghị na inyefe n'echiche nke ntinye aka nke Onye Okike na ịmepụta "ọrụ ebube" dị ka mba Izrel, ịchịkọta ndị a dọọrọ n'agha, wdg, karịsịa ebe ọ bụ na obere "ọrụ ebube" nke "na-eme" nye onye dị ka "ego" dara site na ebe a na-atụghị anya ya.
Ajụrụ m, [dị ka isiokwu ị na-egosi ọtụtụ ihe], gbasara evolushọn, ị dere na ndị na-ekweghị na Chineke na-ele evolushọn n'ime iwu ka ị na-eguzo n'akụkụ wee lelee iwu ndị dị n'èzí wee jụọ 'onye kere iwu ndị a', na mgbe ị hụrụ iwu ahụ. e wuru otu a ọ na-eduga n'okike, ị kwubiri na Chineke kere iwu n'ụzọ dị otú a, ya bụ, na Chineke kere 'iwu evolushọn'. Ọ bụrụ otú ahụ, ọbụna n'ihe banyere ọrụ ebube, ọ bụ eziokwu na 'n'elu elu' na dị mfe echiche, ọ dị anyị ka ihe niile bụ ihe e kere eke, na ụzọ nke ndị Israel ruo ọgbọ dị iche iche nwere nkọwa ebumpụta ụwa, dị ka nguzobe nke State nke Israel, ma ọ bụrụ na anyị na-ele anya n'èzí na-ajụ Yiri ihe ndị amụma na Torah buru amụma, ikekwe anyị nwere ike ikwu na Onye Okike zubere na-eduzi nke a dum 'eke' usoro na nzube, na-ele anya n'èzí usoro na eke iwu n'ime. ọ, nwere ike inye foto nke inye? [Ọbụna n'ihe gbasara obere ọrụ ebube, enwere ike ịnakwere akụkụ echiche a].
B. Ajụjụ ọzọ, nke a ọ pụtara na ị kwenyeghị n'ọrụ ebube e dere na Torah na onye amụma, na a na-ahụ ha na elu anya dị ka ịgọnarị iwu nke physics dị ka: mkpanaka nke na-aghọ agwọ, achịcha nke si n'eluigwe rịdata. , mmiri nke na-aghọ ọbara, ụgbọ ịnyịnya na-agbago n'oké ifufe, na ọtụtụ ndị nchụàjà.
nke atọ. Tụkwasị na nke a, gịnị ka nke a na-ekwu banyere nkwenye gị na ịmara Chineke banyere omume mmadụ, n'elu elu ọ dị ka enweghị nlekọta adịghị egbochi ịmara Chineke, ma ọ dị ka n'ime omimi enwere mmetụta nke nkwenkwe ndị a na ibe ha, wdg dum. echiche nke 'ụgwọ ọrụ na ntaramahụhụ' maka usoro gị adịghị adị, ya mere okwu gị pụtara na 'ụwa ọzọ' bụ nkwenkwe amamihe nke na-enweghị nkwado na Torah [Ekwenyere m n'ezie, ma ndị amụma na akwụkwọ nsọ nwere ọtụtụ ihe. nkwado doro anya], ekweghị na ụkpụrụ a, bụ ikwugharị okwu Leibowitz, Na 'ego' niile nke mitzvah bụ na naanị n'ihi na m mere ime otú ahụ, nke ahụ ọ pụtara gị? Ọ bụrụ otú ahụ, enwere m olileanya na o doro gị anya na ọ bụghị ọtụtụ ndị ga-ala azụ ịbanye n'okpukpe a, gịnị kpatara itinye onwe m n'ime usoro iwu oge ochie na nke oge ochie [ịkwanye na ọtụtụ iwu na mitzvos na-emebi uto ha maka afọ na afọ] gịnị kpatara na ' nara naanị otu akụkụ nke usoro iwu ahụ, naanị gị onye kwesịrị ekwesị, gịnị mere iwu mba Izrel ji dị njọ?
D. Ọ na-ada site n'ihe ị kwuru na ị kwenyere n'echiche nke 'Torah sitere n'eluigwe' [n'ime oke ókè ebe m ghọtara na ị nabatara ụfọdụ n'ime ihe ndị na-akatọ Akwụkwọ Nsọ kwuru], ma ọ bụghị ya, ị ghaghị ikwere na echiche nke 'amụma'. M wee jụọ, gịnị kpatara ebe a kwa ị gaghị eji otu mgbagha ahụ [ọ dịkwa mma n'echiche m ikwu], na ihe niile m na-ahụghị, enweghị m ihe mere m ga-eji chee na ọ dị, ya bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 2500 ọ dịghị onye hụtụrụla. amụma ihe ọ bụ na otú o kwesịrị isi gosi, na ị kwenyere Dabere na amụma ndị na-adịghị njọ nke na-adịbu [amụma n'oge gara aga bụ nke a: mee ihe ọma dị mma, mee ihe ọjọọ dị njọ, usoro niile nke bịara mgbe e mesịrị mee. adịghị esi n'ụzọ nke okike], ya mere, gịnị mere na ọ bụghị nanị iche na ọ dịghị ihe dị ka amụma na ọ bụ echiche nke ndị mmadụ n'oge ochie na dị ka ọ dịghị adị taa ọ dịghị adị n'oge gara aga, na dị ka anyị. ozugbo chere na e nwere ndị mmụọ na ndị mmụọ ọjọọ na spikes na zodiac ịrịba ama na ndị ọzọ mara mma akụkọ ifo, were ya na e nwere amụma, ihu ọma m na-azọrọ gị na-ekwu na okwu gị, enweghị m ihe mere kwere na amụma ma ọ bụrụ na a. Ahụghị m ka ọ dị taa. B. Enwere m ike ịkọwa amụma niile site na okike. nke atọ. Enwere m ihe ndabere ezi uche dị na ya ikwere na n'otu oge ndị mmadụ enweghị ezigbo ọdịiche na ha chepụtara na ha buru amụma ma ọ bụ chepụta ya.
A. Mbụ, Amaghị m ihe nsọpụrụ m kwenyere ma ọ bụ na-ekwenyeghị, a na m abịaru nso na ihe m kwenyere (ma ọ bụ na-ekweghị). Banyere ihe m kwenyere, n'ezie enweghị m ihe ọ bụla na-egosi na ọrụ ebube ọ bụla na-eme n'ụwa anyị. Ma eleghị anya, e nwere ụfọdụ ma enweghị m ike ịhụ ha. Nke a adịghị ka arụmụka m banyere evolushọn ebe ọ bụ na enwere arụmụka na-amanye ịdị adị nke aka eduzi (onye okike), ebe ebe a bụ naanị ihe ga-ekwe omume.
E wezụga nke ahụ, a kọwara ọrụ ebube dị ka ntinye aka nke Chineke n'ụwa, ya bụ, mgbanwe site n'ụzọ ọ na-adị. Hoy kwuru na mmegharị ahụ dịka iwu siri dị kwesịrị ịbụ X na Chineke gbanwere ya ka ọ bụrụ Y. Ọ bụrụhaala na enwere m nkọwa ebumpụta ụwa maka ihe na-eme, ahụghị m ihe mere m ga-eji chee na enwere enyemaka. Ma ọ bụrụ na ọ bụ onye na-emepụta omume okike, m na-ekwu maka nke ahụ. Nke a bụ okike nke iwu.
B. N'ime akwụkwọ m, m ga-akọwapụta nkọwa m gbasara nkọwa dị elu na isi mmalite dị iche iche. N'ozuzu, ọ ga-ekwe omume na n'oge gara aga Chineke tinyere aka karịa (mgbe ahụ e nwere ọrụ ebube na e nwere amụma). Taa, ahụghị m ihe ọ bụla gosiri na Chineke na-etinye aka dị otú ahụ.
nke atọ. Aghọtaghị m ebe a. Kedu maka enweghị itinye aka na enweghị nlekọta? Enwere nleba anya nke omume mmadụ mana enweghị ntinye aka (opekata mpe, ọ bụghị ugboro ugboro).
Nkwenye na Torah na Mitzvah adịghị n'ụgwọ ọrụ na ntaram ahụhụ kama ọ bụ n'ọrụ ime ihe Chineke nyere n'iwu. Maimonides edeelarị n'akwụkwọ nkọwa ya banyere olileanya ndị ọrụ nwere maka ụgwọ ọrụ na egwu ntaramahụhụ. Ikekwe nke a mere e ji kee nkwenkwe ndị a gbasara UAV. Ma eleghị anya, ha dị adị, ma amaghị m.
Ajụjụ nke ọkwa, onye ga-esonye na ndị na-agaghị, adịghị mkpa na okwu nke eziokwu. Ajụjụ bụ ma m ziri ezi ma ọ bụghị ma m ga-ewu ewu. Ana m emegide ụgha dị nsọ (ịgha ụgha iji tinye ọtụtụ mmadụ n'ọrụ Chineke). Ọ bụrụ naanị n'ihi ilu enyí Maimonides. Ndị na-esonyere ọrụ ahụ na-eme otú ahụ na njehie, n'ihi ya, ha na-arụ ọrụ maka Chineke na-ezighị ezi, njikọ ha nwekwara obere uru.
Kedu ihe jikọrọ ya na iwu obodo Israel? Na onye na-edebe ha na-apụkwa n'ọrụ okpukpe ya? Gịnị kpatara na ị naghị ekwu maka iwu FIFA (Football Association)?
D. A ga-akọwakwa nke a n’akwụkwọ m. A na-atụlekwa ụfọdụ n'ime ihe ndị a n'akwụkwọ eziokwu na nke na-adịghị akwụsi ike (na arụmụka akaebe ụbọchị). Ebe a ka m ga-akọwa nkenke. Ọ bụ ezie na a na-eduzi iwu nke okike n'otu ụzọ ahụ mgbe niile, ma ụmụ mmadụ na-agbanwe. Na ihe ha na-echebu na-eche taa? Gịnịkwa ka ha mere otu oge taa? Gịnị ka ha na-eyibu taa? Ya mere, gịnị mere i ji chee na àgwà Chineke adịghị agbanwe agbanwe? Ọ bụrụ na m ga-ekpebi, ọ ga-akara m mma iji ya tụnyere ụmụ mmadụ, ọ bụghịkwa ka ọdịdị na-adịghị ndụ. Ọ dịghị ihe mere a ga-eji chee na ọ ga-eme otu ihe ahụ mgbe niile. Ya mere, ọ bụrụ na o kpebiela iji nwayọọ nwayọọ pụọ n'ụwa, anaghị m ahụ ya dị ka ihe dị ịtụnanya ma ọ bụ ihe a na-apụghị ịghọta aghọta. N'ụzọ megidere nke ahụ, enwere m ọbụna echiche maka ihe kpatara nke a ji eme. Dị ka nwatakịrị mgbe o tolitere nna ya na-ahapụ ya ka ọ nọ naanị ya ma na-agba ọsọ n'onwe ya. Otú ahụ ka ọ dịkwa àgwà Chineke n’ebe anyị nọ. Ọpụpụ ya abụghị ọdịda nke ọgbọ dị ka anyị maara nke ọma, kama ịrị elu (mmaturation) nke ọgbọ. Taa, anyị nwere ike ịghọtarịrị na e nwere onye ndu maka isi obodo ọbụna na-enweghị ọrụ ebube. Anyị nwere nkà na nkà ihe ọmụma ruo n'ókè nke ịghọta na ụwa nke iwu ndị a kapịrị ọnụ na-achị na-agba akaebe nke ukwuu nye Onye Okike karịa ụwa dị egwu. Ya mere ugbu a, ọ dịghịzi mkpa ọrụ ebube. Dịkarịa ala ma ọ bụrụ na anyị na-akpa àgwà ma na-eche echiche ka ndị okenye, dị ka a tụrụ anya n'aka anyị. Enwere n'ezie ndị ọzọ nwere echiche nwata, mana site na ha nwere ike ịtụ anya na ha ga-etolite.
N'ịgbaso nzaghachi a, ị kwuru na "ọ ga-ekwe omume na n'oge gara aga, Chineke tinyere aka karịa." Ma enwere amaokwu na Torah nke na-ekwu maka itinye aka ruo ọgbọ dị iche iche (na enyekwara m mmiri ozuzo n'ala gị n'oge oge, ma nye m mmiri ozuzo gị n'oge oge, wdg). Olee otú a pụrụ isi kwuo na Chineke (bụ́ onye o doro anya na ọ ma na ọ ga-akwụsị imekọrịta ihe n’oge ụfọdụ) dere nkwa ‘nkwụghachi ụgwọ’ nke o zubere mgbe ụfọdụ ịkwụsị imezu ya? A sị ka e kwuwe, ọ bụrụ na nne ma ọ bụ nna ekwe nwa ya nkwa swiiti iji gbanwee àgwà ọma, ọ bụrụgodị na nwatakịrị ahụ tolitere, a na-atụ anya ka nne ma ọ bụ nna mee ihe o kwere ná nkwa, ọ̀ bụ eziokwu? Ma ọ bụrụ na ọ chọrọ ịkwụsị inwe mmekọahụ, ọ dịkarịa ala ọ ga-akọwa ihe kpatara ya (anyị tolitere, wdg).
Na Torah ọ bụkwa banyere ndị amụma, amụma na ọrụ ebube, na ha onwe ha na-apụ n'anya. Ụlọ nsọ na àjà ndị ahụ apụkwara n'anya. Otú ahụ ka ịgba ohu dịkwa ọtụtụ. Anyị achọpụtala na mgbe ụfọdụ Torah na-agwa ndị mmadụ n’oge a na-enye Torah okwu, na e nwere mgbanwe ndị Torah na-ekwughị okwu. Mmadụ nwere ike ịkọwa ihe kpatara ya, mana ndị a bụ eziokwu.
Ma ndị amụma, amụma, ọrụ ebube, Ụlọ Nsọ, àjà, ohu, wdg, ihe ndị a bụ ihe na-enweghị nkwa nke ga-ada n'ọgbọ. Enwere naanị ihe atụ ndị ha mere n’oge ụfọdụ, ma gịnị mere anyị ga-eji tụọ anya na ha ga-abụkwa n’ọdịnihu? Ma gbasara ụgwọ ọrụ na ntaramahụhụ, Gd dere hoo haa na Torah na e nwere njikọ maka ọgbọ dị iche iche n'etiti ememe mitzvos na ụfọdụ ụgwọ ọrụ, ya mere enwere m ezi ihe mere m ga-eji na-atụ anya na njikọ a ga-adị n'ọdịnihu, ma ọ bụrụ na anyị kwubie na ọ na-eme. adịghị adị ọ bụ a siri ike ajụjụ nke Torah eziokwu, ọ bụghị otú ? Naanị nkọwa m nwere ike iche maka ajụjụ a bụ okwu ndị dị ka: "Ụgwọ ọrụ nke mitzvah n'àgwàetiti Alma Likha" na mgbe ahụ, anyị ga-efopụ ndị dị mfe site n'amaokwu ndị dị ka "M wee nye gị mmiri ozuzo n'oge kwesịrị ekwesị" na setịpụ. ha dị ka ilu maka ụgwọ-ọrụ n’ụwa ọzọ. Ma ọ ka na-esi ike, n’ihi na ọ dịghị Baịbụl dị nnọọ mfe.
Aghọtaghị m. Okwu amụma gụnyere ọtụtụ iwu. Ọ bụ na mitzvos ekwesịghị ịbụ maka ọgbọ? Akụkụ nke ọrụ Chineke bụ ịge Onye-amụma na ntị nke mmụọ Ya maka anyị. Nke a abụghị ikpe ụfọdụ anyị nwere onye amụma. Nke a bụ ihe Torah kwere nkwa na ọbụna nye ya iwu ka ọ gbalịa nụ olu ya. Onye amụma sokwa n’usoro e ji aga agha.
Nkwa ndị ahụ na ọbụrụ na anyị edebe iwu-nsọ ka a ga-enye anyị mmiri ozuzo, a kọwara ya dịka nkwa nke na-ekwu maka oge mmiri ozuzo dabere na Gd. Mgbe ọ dabere na ya, a ga-enye ya na-esochi emume. Ugbu a o kpebiela inye anyị ya n’ihi na anyị etoola, o doro anya na site ugbu a gaa n’ihu ọ dịghị mkpa. Ọ na-akọwara anyị naanị amụma ya: mgbe m na-enye ihe ọ bụ maka idebe iwu.
Ma onye amụma ahụ, e dere ya n’akwụkwọ Deuterọnọmi: “N’ihi na onye amụma ga-ebili n’etiti unu,” ọ dịghị nkwa mweghachi n’ebe a. Ya bụ, iwu niile metụtara nyocha nke onye amụma bụ iwu dị adị - ọ bụrụ na a ga-eme ka onye amụma guzosie ike, otú ahụ ka ọ dị. Dị ka ọ bụrụ na ị na-eyi uwe nwere nku anọ, ị ga-etinyekwa tassel na ya. Mitzvah anaghị eguzo, mana ọ gaghị adị mgbe niile. Ma ihe pụrụ iche banyere amaokwu ndị na-ekwu maka ụgwọ ọrụ na ntaramahụhụ bụ na ha nwere njikọ na ọ bụrụ na anyị eme A. - mgbe ahụ, Chineke ga-eme B. Mmekọrịta ahụ n'onwe ya adabereghị n'ọnọdụ ọ bụla. Ọ dị ka njikọ ahụ na-adị mgbe niile. Ozugbo anyị bịarutere nkwubi okwu na njikọ a adịghị, ọ dị ka ọ na-emegide Torah ebe a. Ị nwere ike ịrụ ụka na ọ bụghị nkwupụta ọ bụla dị na Torah bụ eziokwu ruo ọgbọ. Ma mgbe ahụ, a manyere ya ikwu na iwu n'onwe ha nwekwara ike ịgbanwe.
Gịnị mere na ọ bụghị nanị na-ekwu na mgbe njikọ a na-apụghị ịhụ n'ezie, ma ọ dị na a zoro ezo ụzọ (zoo ihu)?
Ị wetawo amaokwu ndị na-ekwu banyere onye amụma ụgha. E kwuwerị, amaokwu ndị na-ekwu banyere onye amụma (Deuterọnọmi):
Onye nkwuchite okwu Mkrbc Mahic Cmni Ikim nye gi Ikok Chineke gi chi Tsmaon: Ccl Asr nnu Mam Ikok Chineke gi Bhrb na-apụ na Hkhl, na-ekwu na ọ bụghị Asf Lsma At Cole Ikok Alhi na At brigade Hgdlh Hzat bụghị Arah One ọzọ, na La Amot: wee sị Ikok. chi nwanyị Hitibo Asr Dbro: ọnụ na-ekwuchitere Akim Lhm Mkrb Ahihm Ma eleghị anya Neuvena: Na General Islander, Chineke agaghị eche wheragram: " The Shavua Jacka Island
Site n'ụzọ, nkọwapụta kpọmkwem abụghị mitzvah dị adị kama ọ bụ mitzvah dị mma (dị ka tassel). Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mitzvah ọ bụla dị mma bụ ọnọdụ. Mitzvah dị adị bụ mitzvah nke enweghị ike ịkwụsị kama ọ bụ naanị idobe ya. Enwere ike ịkagbu mitzvos ndị a (ọ bụrụ na ọnọdụ dị - yi uwe na nku, ma emela mitzvah).
Dị ka nke ikpeazụ ajụjụ, ọ pụrụ n'ezie na-ekwu na Chineke mgbe niile na-etinye aka ma mgbe anyị na-enyocha ọ na-agba ọsọ n'ime oghere ka mgbagwoju anya anyị. Nke ahụ na-ada m eleghi anya. Mgbe ọ bụla m na-ele ihe na-eme n'ụwa ihe na-enwe a eke na nkịtị nkọwa. Iwu nke okike na-arụ ọrụ, na mgbe ị na-anwale ha na ụlọ nyocha, ihe ga-eme na-atụ anya ime. O nweghị ihe mere a ga-eji chee na e nwere egwuregwu izo-anya dị otú ahụ ebe a. Nke a abụghị ihe akaebe ma ọ bụ nleba anya n'echiche nkịtị. Mgbe m na-ahụ ahụ na-akpụ akpụ, echiche m bụ na ike mere ya ọ bụghị na Chineke kpebiri ịkwaga ya n'enweghị ike. Ọzọkwa, m na-echekwa na e nwere ozu ndị na-agagharị na-enweghị ike. Nke a bụ echiche sayensị anabatara ma ọ dị ka ezi uche zuru oke ma na-arụ ọrụ nye m.
Amaokwu ndị a adịghị egosikwa mgbe a ga-eguzobe onye amụma ahụ, ma ọ bụ ugboro ole. N'ozuzu, nkwupụta nke ụdị: Chineke ga-eme ka X abụghị ihe a ga-agbagha (n'ihi na ọnweghị oge akwadoro maka nkwupụta ahụ). Mana nkwupụta nke ụdị: Ọ bụrụ na X emee, Chineke ga-eme ka Y ha abụọ bụrụ ihe a na-apụghị ịgbagha agbagha n'ihi na X na-eme na Y bụ ihe atụ. Ya mere enwere nhọrọ atọ iji dozie arụmụka nke abụọ. Ma ọ bụ ịsị na X emeghị n'ezie. Ma ọ bụ kwuo na Y abụghị ihe atụ. Ma ọ bụ ikwu na a gọnarị ihe a na-ekwu. Ma ọ bụrụ na a gbaghaa ya, ọ bụghị ajụjụ dị mfe gbasara izi ezi nke nkwupụta na Torah n'ozuzu ya.
Ọ dịghị ihe ọ bụla ebe a bụ ihe a na-apụghị ịgbagha agbagha n'echiche sayensị. Iwu ole ka a ga-eme ka mmiri zoo? Mmadụ ole kwesịrị ime iwu ndị a? Kedu mmiri ozuzo ga-ada, ogologo oge ole ka ọ ga-ada? Nke a bụ ihe a na-apụghị ịgbagha agbagha dị ka okwu nke onye-amụma.
Dị ka m dere, echiche m na Chineke adịghị etinye aka abụghị n'ihi ngọnarị nke sayensị, kama ọ bụ echiche n'ozuzu ya (o yighị ka ọ na-etinye aka). Nke bụ́ eziokwu bụ na n’ọnọdụ anyị nọ na ya, m na-ekwu na Chineke adịghị etinye aka ma ọtụtụ ndị kwere ekwe na-eche otú ahụ. Ha na-eche na mgbe na-eme mitzvos mmiri ozuzo na m na-eche na ọ dịghị njikọ. Anya gị na-ahụ na ọnọdụ eziokwu abụghị n'ezie nkwenye ma ọ bụ ịgbagha ihe ọ bụla ebe a.
Aghọtara m na ọ bụghị na sayensị rebuttable, ma ọbụna a n'ozuzu echiche ezuru m rebuttable (ọ bụghị na ezi uche-mgbakọ na mgbakọ na mwepụ echiche nke okwu).
Ihe dị iche n'ihe gbasara onye amụma na okwu mmiri ozuzo bụ na njikọ dị n'etiti iwu na ụgwọ ọrụ kwesịrị (n'echiche nkịtị) ga-adị ngwa ngwa. Ya bụ, ọ bụrụ na ndị Izrel na-eme ihe kwekọrọ n’iwu ahụ, nzaghachi sitere n’aka Chineke bụ ihe ezi uche dị na ya na ha ga-abịarute n’ime oge ezi uche dị na ya (kwuo n’ime ọnwa ole na ole ma ọ bụghị mgbe afọ 700 gasịrị). Mana n'ihe gbasara onye amụma, o nweghị ihe amachibidoro Chineke izipu otu onye amụma otu ugboro n'ime afọ 3000. Ọ dịghị "oge ezi uche" ebe a nke a pụrụ ichetụ n'echiche.
Ihe m na-agbalị ịghọta bụ ka ị na-edozi esemokwu dị n'etiti echiche gị na ozi doro anya na-apụta na amaokwu ndị ahụ. Ị dere na mbụ azịza dị ka nke a: "Ọ na-akọwa nnọọ anyị amụma ya: mgbe m na-enye ihe ọ bụ maka ememe nke mitzvos." Enwere m ike ịnakwere nkọwa ahụ. Ma ọbụlagodi n'echiche gị ọ siri ike ikwupụta amụma a ma ọ bụrụ na ọ meghị ya?
Ọ na-eme ya. Nye ụwa mgbe ọ na-enye ihe ọ na-agbaso iwu. N'oge a ọ naghị enye, n'oge gara aga o mere. N'oge a, ọ dịghị ezite ndị amụma n'oge gara aga. Nke a bụ amụma gbanwere (ọ bụghị njikọ dị n'etiti inye na ekpere kama inye onwe ya).
Na gafere nke ahụ, dịka m degara gị akwụkwọ, Fook Hezi na n'ọnọdụ dị ugbu a, esemokwu bilitere maka ma ọ na-etinye aka ma ọ bụ na ọ bụghị. Ya mere, ọ dịghị onye nwere ike ịzọrọ na eziokwu n'onwe ya na-egosi ntinye aka, ọ bụghị ọbụna n'ihi echiche na ọgụgụ isi. Yabụ na n'agbanyeghị m, ị nwere ike jụọ ihe ebumnuche okwu a bụ. Eleghị anya nkwupụta n'ozuzu nke na-ekwesịghị iji nlezianya nyochaa ya, ọ na-egosikwa mkpa nke mitzvos. Mkpa nke mitzvos ka dị taa. Eziokwu na-agbanwe mana nkuzi ahụ bụ ebighi ebi.
29 Elul 09 - 2016/15/04 na XNUMX:XNUMX
Ka anyị malite na Mister Tsitsro, mgbe ahụ ihe Derech Eretz Kedma pụtara na Torah abụghị ihe ọhụrụ ma ọ bụrụ na ọ bụghị ihe ọ pụtara, e nwere ụdị nnupụisi ebe a [Enwere m àgwà ma e wezụga ịbụ ohu Gd]
N'ihi na gịnị ka ọ dị mkpa ma ọ bụrụ na ụkpụrụ bụ halakhic ma ọ bụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-abụghị mmetụta na iwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị sitere na [mmadụ] nwere nghọta na iwu halakhic bụ naanị iwe na ọmịiko,
Banyere onye rabaị nke Ponivez, arịrịọ a bụ halakhah, ya mere ọ bụ ọdịda ya ikwu, o doro anya na o kwughị otuto n'ihi halakhah na kwa onye arịrịọ ekwughị maka otu ihe kpatara ya n'uche ya,
O dokwara anya na ị na-ekwu Hillel n'ihi na otu a ka e siri kpebisie ike na halakhah, dịka ị gaghị ekwu ma ọ bụrụ na ọ bụghị,
Banyere mbipụta nke enweghị nlekọta na Israel, ọzọ ihe mere o ji na-enyere aka na onye,
“Ekpere a na-azaghị,” ọ ghaghị ịdị nnọọ nso ime ka ụmụ Izrel bịaruo Chineke nso na ijikọta ya na Onye Okike ya.
Ma nke ahụ kwa, olee ebe i si bịa?
M na-ebe akwa maka mkpasu iwe dị otú ahụ, ị ​​bụ onye maara ihe, gwa m banyere ahụmahụ gị dị iche;
Anaghị m arụ ụka na mmetụta. Onye ọ bụla na mmetụta ha.
Ọbụna ma ọ bụrụ na ị na-ekwu ihe niile gara (na nke a abụghị eziokwu), ajụjụ a ka bụ ihe iwu a na-egosipụta. A na-etinye echiche ndị a n'ime ya.
Mbipụta nke ndị na-adịghị ele anya na-enyere ndị na-eche na a na-arụ ọrụ ha nke ukwuu wee hapụ omenala ahụ dum. M na-ezute ọtụtụ n'ime ha. Ndị na-enweta ọdịnaya anabatara ga-anọgide na-eleda onwe ha anya na ozi ndị a na-emekarị. Mmetụta m bụ na mmadụ kwesịrị ịgwa ọbụna ndị na-eche echiche ziri ezi okwu. Ọ bụkwa ngalaba kwesịrị ka a na-ezo aka na ya. Ihe a na-ekwu na eziokwu abụghị ihe dị mkpa kama ọ bụ naanị nchegbu maka ndị nzuzu obodo, na amụma nke ụgha ịghara ibipụta eziokwu, bụ ihe na-eme ka anyị hapụ ụmụ anyị kacha mma ma nọrọ na ndị na-eri lukes ndị a. Nke a bụ ahụmahụ m dị iche. Ị jụrụ, ya mere m gwara.
Banyere ịrapara na isi mmalite ochie megide eziokwu sitere na egwu dị ka nke gị, enweghị m ihe ọ bụla ma ọ bụghị iweta Gemara na Yoma Set AB:
Damar Rabbi Yehoshua Ben-Levi: Gịnị kpatara eji akpọ ya ndị otu Knesset - onye weghachiri okpueze ahụ n'ebube mbụ ya. Ata Moses we si uku nwoke ahu di uku di kwa egwu, Ata Jeremaia, si, Ndi ala ọzọ sitere na Kakrin n'ulo uku Ya, E-e, ọ bu ihe-egwu-Ya? Ekwughị egwu. Ata Daniel siri: Ndi ala ọzọ bu ndi-orù nime umu-ya ndikom, Aya ndi-dike-ya? Okwughi dike. Ya na ya na-adịghị na ha kwuru: Kama, ọ bụ dike nke dike ya na-emeri mmuo ya, nke na-enye ogologo ndị ajọ omume. Ma ndia bu ihe-egwu-Ya-na nātughi Onye agọziri agọzi, otù mba gēsi di n'etiti mba nile? Na Rabbanan Hichi bụ ohu m na ihe kacha mkpa nke Teknat Datkin Moshe! Rabbi Elazar kwuru: Ebe ọ matara n’ime Onye Ngọzi na ọ bụ eziokwu, ya mere ha agwaghị ya okwu ụgha.
M na-ekwukarị na m na-ekwu na ọ naghị adọta ha site na isi mmalite dị iche iche, Leibowitz (onye m na-ekwenyeghị na ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe ọ bụla) ma ọ bụ onye ọ bụla ọzọ. Ọ bụrụ na ịchọta n'etiti ha na Leibowitz ọ bụ mkpebi gị, mana ọ nweghị ihe jikọrọ ya na mkparịta ụka ahụ n'onwe ya. Ọ bụ ihe nwute na onye ọ bụla nke na-ekwusa iji chepụta echiche ụwa dị ka isiokwu ndị ọzọ si dị na-ata ndị ọzọ ụta maka àgwà dị otú ahụ. The disqualifier na Momo.
Nke a bụ na echeghị m na ntụzịaka na ekpere dị n'ụdị ụgha dị nsọ.
M wee jụọ gị ebe i si bịa,
Kpọmkwem kwenye na ndị mmadụ na-ajụ ma ọ bụ na-ala azụ banyere ikwu eziokwu [na ọtụtụ ndị dị otú ahụ adịghị akwado mgbasa ozi ma ọlị na gbasara nlekọta onwe onye na ekpere karịsịa mgbe ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị kwere ekwe na-eche na anya na-ekiri na nlekọta onwe onye n'okpuru onye ọ bụla]
Echeghị m ma ọlị na nlekọta onwe na ekpere bụ akụkụ nke ajụjụ gbasara ikwu eziokwu ma ọ bụ enweghị ya ma ọ bụ nke ihe ndị chọrọ mkpughe,
A] n'ihi na ọ dịghị mkpa ikwu na ọ bụ otú ahụ,
B] anaghị etinye aka n'ụzọ ọ bụla,
Ọ bụrụ na Chineke nwere ike inyere onye aka ya dị ọcha aka ma ghara ime ya, ị na-ata ya ụta n'ihi na ọ naghị eguzo n'ọbara onye agbata obi [ọ bụ ezie na ọ bụghị onye agbata obi,] n'echiche.
Ị ga-ekpebi ma ihe ị na-ekwu ọ̀ bụ isi okwu ahụ, na ihe m na-ekwu abụghị eziokwu, ma ọ bụ na ị na-ekwu na m kwesịrị ịgha ụgha “ụgha dị nsọ” ka ọ ghara ịkpasu okwukwe na-adịghị ọcha nke ndị mmadụ iwe.
Ataghị m Chineke ụta maka ihe ọ bụla. O nwere ike kee ụwa nke iwu na-agaghị achị mana o kpebiri (ma eleghị anya ọ na-atọkwa ya ụtọ) ime ya dịka iwu siri dị. Ka o sina dị, ì chere na ọ gaghị enye aka na Oké Mgbukpọ ahụ ma ọ bụ n’ọdachi ọ bụla ọzọ? Ya mere, gịnị mere na ọ naghị enye aka? Gịnị mere i ji chee na m na-ata ya ụta karịa gị? Na m mere ka ndị mmadụ na-ata ahụhụ n'ụwa?
Mana ihe ndị a niile ka a ga-akọwa nke ọma n'akwụkwọ m.
A doro m anya nke ọma,
Mbụ, ahụbeghị m nkwupụta dịka nke gị na enweghị nlekọta ma ọlị.
Ma ọ bụ echeghị m na ọ bụ ụgha dị nsọ, ọ bụrụ na ọ bụ n'ezie otú ahụ gịnị kpatara na ị gaghị ahapụ ya otú ahụ,
Banyere iwu, nkwadebe nke iwu okike nke agbanwebeghị ya bụ na enwebeghị nlekọta, ma ọ bụ iwu nwere ụbọchị?
Banyere Oké Mgbukpọ ahụ, wdg, ọ bụrụ na ihe niile dị ka akụkọ ahụ si dị, amaghị m otu akaụntụ ma ọ gaghị emegide okwukwe m dị mfe na enweghị ibu arọ,
Ọ bụrụ na enweghị akaụntụ (nleba anya) azụ Kushia na Dukhta,
Haftarah nwere ike inwe uto, ọ dị mma,,,
1. Ya mere?
2. Akọwara m ihe kpatara na agaghị ahapụ ya.
3. Iwu nke okike, nke mgbe a na-amaghị ha, Chineke kwere ka ya onwe ya pụọ ​​n'ebe ha nọ karịa, na n'oge a ha maara nke ọma na ọ ga-abụ na ọ naghị eme ya.
4. O nweghi ajụjụ ma ọ dọkpụrụghị ebe ọ bụla. Ọ bụrụ na ị chere na ihe niile na-eme bụ ezi omume (ma ewezuga na ị ghọtaghị), gịnịzi ka ị na-eme ka ọ na-esiri m ike? A sị ka e kwuwe, ọ bụrụgodị na, n'echiche m, ihe niile na-adịghị elele, ma ihe na-eme bụ kpọmkwem ihe kwesịrị ime, ya mere gịnị bụ nsogbu na Chineke, n'uche m? A sị ka e kwuwe, ọ dịghị onye na-ata ahụhụ gabiga ihe kwesịrị ya.
29 Elul 09 - 2016/15/07 na XNUMX:XNUMX
Ndewo Rabbi Michael
Ya mere, ikekwe ọ dị mma na nke a bụ ikpe, nsogbu sitere na Torah, site na ndị amụma na Akwụkwọ Nsọ, na ihe ngọpụ na e nwere nanị ogologo okwu dị na Talmud na-emegide okwu ahụ, nsogbu nke ọzụzụ na Chazal.
Akọwara m nke ọma ihe kpatara ee hapụ ya,
Ajụjụ a bụ, gịnị ka ọ pụtara, “o nwere ihe ọ pụtara dị iche,” ma ọ bụ echiche dị iche?
Nke mbụ bụ ihe nzuzu, nke abụọ, ma ọ bụrụ na ọ dịghị ihe jikọrọ ya na ụgwọ ọrụ na ntaramahụhụ n'ụzọ ọ bụla [nwere ụgwọ ọrụ na ntaramahụhụ?] Ọ bụrụ na enweghị akaụntụ [nlekọta] mgbe ahụ eleghị anya ọ bụghị, mgbe ahụ ihe fọdụrụ n'ezie ..M na-agbalị. iche echiche echiche na-enweghị ihe ịga nke ọma,
Capricorn udo. Echere m na ike agwụla anyị.
29 Elul 09 - 2016/15/08 na XNUMX:XNUMX
Ọ bụ ebe a ka ike gwụrụ m,
Na na XNUMXth m ga-enwe obi ụtọ maka ụfọdụ azịza nke akụkụ a nke m dere
Ajụjụ bụ, gịnị ka ọ pụtara, "o nwere ihe ọ bụla ọzọ?"
Ejighị m n'aka na m ghọtara ihe kpatara ihe ndị a na-ekwu. Echere m na ọ na-ekwu maka ihe mere Chineke ji kee ụwa ka iwu na-achị. Enwere m ike ịtụ aro otu uto, dịka ọmụmaatụ na ọ chọrọ ka anyị nwee ike ịhazi onwe anyị n'ụwa. Ọ bụrụ na emeghị ya n'ụzọ iwu, ị gaghị enwe ike ịkọ ihe ga-eme n'ọnọdụ ọ bụla na ị gaghị adị ndụ.
Ihe niile ị dere, aghọtachaghị m. Mana biko ọ bụrụ na enweghị ezigbo ihe ọhụrụ, anyị ga-akwụsị ebe a. Ọ bụụrụ m omenala ịzaghachi email ọ bụla, mana saịtị a na-achọ oge dị ukwuu n'aka m, ọtụtụ n'ime ya bụ ikwugharị ihe edere na ikwu.
29 Elul 09 - 2016/15/09 na XNUMX:XNUMX
O doro anya na enwere mgbagwoju anya n'etiti ozi ịntanetị ebe a n'ihi na aghọtaghị m ihe kpatara ike gwụrụ anyị mgbe m na-emeghị onwe m otu ugboro,
Aga m ebugo ihe ị dere ọzọ zaa, ebe a,
Rabbi Makal dere ,,,
1. Ya mere? [Ọ bụ n'ihe gbasara ihe ọmụma onye ọ bụla]
2. Akọwara m ihe mere na agaghị m ahapụ ya [N'ihe gbasara nlekọta]
3. Iwu nke okike, nke mgbe amaghi ama, Gd kwere onwe ya ka o wezuga onwe ya karia ha, na n'oge a ha mara nke oma, o nwere ike oghi eme ya.
1] Ya mere ma eleghị anya ọ dị mma na nke a bụ ikpe ahụ, nsogbu ahụ sitere na Akwụkwọ Nsọ nke e dere n'ụzọ megidere nke ahụ na ikwu na e nwere nanị otu awa na maka oge esemokwu ogologo okwu dị ogologo na Talmud, nsogbu nke ọzụzụ na Ndị Sages agaghị ebili na ajụjụ,
2] Akọwala m na m ga-achikota, echeghị m na nlekọta onwe onye na ekpere bụ akụkụ nke ajụjụ na azịza gbasara ikwu eziokwu ma ọ bụ enweghị ya n'ebe ọtụtụ ndị ahụ ị kwuru na ị na-eche na a na-arụ ọrụ na karịsịa mgbe ọ dịghị mkpa. kwuo na ọ bụ n'ezie,
4] I dere na ma eleghị anya Gd nwere isi na mkpebi ya ịghara ile anya na ọ gaghị emegide ajụjụ nke ọrụ metụtara ya,
Ajụrụ m, ọ bụrụ na ụtọ ya bụ ihe anyị na-amaghị, mgbagha ọzọ, ọ dị ka ihe nzuzu,
Ọ bụrụ na ụtọ ahụ bụ ihe a na-amaghị ama mana ọ dị mma ma enweghị njikọ na ụgwọ ọrụ na ntaramahụhụ [ma ọ bụrụ na enweghị nkọwa na nlekọta ahụ eleghị anya ọ bụghị] Anaghị m ahụ akụkụ ebe a,
Ị na-emeghachi onwe gị.
1. M sị na ọ baghị m uru na ọ nweghị onye na-ekwu ka m. Gịnị kpatara m ga-eji nye nkọwa?
2. Akọwakwara m ihe mere ee hapụ ya. M kwuru na m zutere ọtụtụ ndị ekpere na nlekọta ha bụ kpọmkwem okwu. Kedu ihe emegharịrị ebe a?
3. N'oge gara aga amachaghị sayensị na ndị mmadụ amaghị iwu okike. Ya mere, yikarịrị na eke ka deviate ha. Taa, anyị maara ha. Dịka ọmụmaatụ, ha na-echebu na mmiri na-ezo n'ihi iwu. Taa, anyị maara n'ọdịnihu ole mmiri ozuzo na-ada na mgbe, na na ọ dabere na iwu nke meteorology ma ọ bụghị mitzvos.
4. Aghọtaghị m ebe m dere na Chineke nwere ihe mere na ọ gaghị ele. M dere na ọ naghị ele anya. Ụtọ ahụ? Ma eleghị anya, eziokwu ahụ bụ na anyị abụworị ụmụaka buru ibu ma ghara inye aka. Mana n'agbanyeghị echiche ndị ahụ, ajụjụ bụ eziokwu bụ na ọ ga-eleba anya n'ezie? N'uche nke m - mba.
Ọzọ, m na-ede na ike agwụla anyị.
Rabbi Makal dee
Mana o kpebiri (ma eleghị anya ọ na-amasị ya) ime ya dịka iwu siri dị.
Ma eleghị anya, eziokwu ahụ bụ na anyị abụworị ụmụaka buru ibu ma ghara inye aka.
Ya mere, nke ahụ bụ azịza na-enweghị iguzo maka ọbara ibe ?? nnukwu ụmụaka ????
Ọ bụrụ na nke a bụ ihe a na-eme, ike agwụla anyị n'ezie mana ị naghị enyo m enyo maka ikuku iwu na-enweghị isi dịka a na-ebo m ebubo ebe a.
Capricorn udo. Ị na-emegharị ọzọ ihe ndị a tụlere n'isi.
Akọwala m gị enweghị chi ọbụbọ na nkwupụta "ị gaghị eguzo" nke a na-edukwa gị n'otu aka ahụ.
Enweghị m mmasị na ya, mana maka m, anyị emeela.
Ndewo Rabbi Michael,
Onye nwe ya maara ka esi agụ n'etiti ahịrị
M zara ya, Enwere m ụgwọ ọnwa na ntaramahụhụ, ka esi eme akaụntụ ahụ, amaghị m nke ọma,
Ma etinyela aka mgbe ọbara na-agba gị n'ihi na ị na-anwụ, ??. ??
Ọ bụrụ na ị kwụsịrị ,,,, mgbe ahụ maka ndụ,,
Rabaị ahụ ọ́ dịghị ahụ nloghachi nke ndị Izrel n’ala ya mgbe puku afọ abụọ nke ije biri n’ala ọzọ na ozugbo afọ atọ gasịrị ka Oké Mgbukpọ ahụ gwụsịrị dị ka ihe dị iche n’ihe okike? Ọ bụ na e nweghị ike ịsị na nke a sitere na ndapụta Chineke?
Nlaghachi nke ndị Israel n'ala ha bụ n'ezie ihe omume a na-adịghị ahụkebe na ọkwa akụkọ ihe mere eme, mana akụkọ ihe mere eme bụ ihe dị mgbagwoju anya ma ọ dịghị ụzọ a ga-esi mara ma ọ bụrụ na Chineke etinye aka n'ebe a. N'ozuzu echere m na usoro a nwere ike ịghọta nke ọma ọbụna na-enweghị mkpa itinye aka ya. Ndị ụwa na-ahụ usoro a ma ghara imebi nkwenkwe ekweghị na Chineke na nke sayensị.
Ya mere, ịbịaru nkwubi okwu sitere na "ọrụ ebube nke akụkọ ihe mere eme" bụ ihe dị oke egwu na ihe na-adịghị ekweta. Nke a nwere ike dị iche na ọrụ ebube nkịtị.
Ọ bụ ezie na e nwere ike ịdị arọ na eziokwu ahụ bụ́ na ndị amụma buru amụma banyere nlọghachi nke ndị mmadụ n’ala ha tupu oge eruo, na n’echiche nke a, a pụrụ inwe ohere ịhụ usoro a dị ka ihe na-egosi ntinye aka nke Chineke. Amaghị m. Naanị m maara na ọ bụrụgodị na nke a emeghị ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ dịghị onye ga-eburu Bible ya n'isi (nke kachasị na ha gaara achọ amaokwu ndị dị mkpa ma wepụ ha n'ịdị mfe ha), n'ihi ya, ọ na-esiri m ike ikwupụta oke ọnụ ọgụgụ dị elu. na amụma ndị a. A tesis nke na-adịghị eguzo n'ule nke rebuttal bụkwa bụghị nnọọ mmasị mgbe ọ na-abịa eziokwu (mgbe niile, e nwere amụma ndị na-emezughị n'ezie na ọ dịghị onye na-atụ egwu ya). Kedu ihe ọzọ, amụma ndị a n'onwe ha so na usoro ahụ n'onwe ya (n'ihi nke anyị laghachiri ebe a). Ọ bụ amụma na-emezu onwe ya, n'ụzọ nkịtị.
29 Elul 09 - 2016/15/11 na XNUMX:XNUMX
Ọ dị m ka a ga-ekwu / dee Kikro n'asụsụ Hibru. Ọzọkwa, okwu ahụ sitere n'aha ya jikọtara ya na Publius Trentius Ash.
Oh, echeghị m na a ga-ebipụta ya ozugbo mana a ga-eziga ya na nchịkọta akụkọ saịtị. Ị nwere ike ihichapụ okwu a na nke dị n'ihu ya.
N'ezie ọ na-abịakwute m, mana kọmputa m anaghị azaghachi. N'ihi ya, m kwadoro akwụkwọ ahụ ma naanị ugbu a ka m nwere ike izipu nzaghachi nke m. Ọ bụ:
Gịnị kpatara ihichapụ? Okwu abụọ ndị niile na-agụ akwụkwọ anyị kwesịrị ịmụta na ya. Maka nke mbụ, ejighi m n'aka. Aha ahụ na Latin bụ Cicero, ahụghịkwa m ihe mere a ga-eji gbanwee ịkpọpụta aha. Ọ bụrụ na mmadụ nọ na United States na-akpọ David, m ga-akpọ ya na Hibru David. Echeghị m otu ahụ.
Aghọtaghịkwa m ma ọlị ihe mere e ji sụgharịa Latin C gaa na enwe Hibru (dị ka Siza kama Siza na mbụ).
Banyere nke abụọ, daalụ nke ukwuu. Ruo ọtụtụ afọ, echere m na ọ gbagọrọ agbagọ. Ugbu a ị bụ onye mmeri na onye rabaị maara ihe.
Ezitere m nzaghachi gị nke abụọ, mana ọ bụ naanị inwe oge ezi uche dị na ya. Ọ bụrụ na ị hụrụ na nke mbụ bịara ozugbo na saịtị (ya mere i chere), mgbe ahụ ị kwesịrị ịghọta na nke abụọ bụ otu. Dị ka e kwuru, m kwadoro ha abụọ maka ibugo (nke a bụ otú e si arụ software na ihe niile na-abịakwute m). Ana m akwado ihe niile, ma e wezụga ihe ndị na-ekwesịghị ekwesị (nke BH adịghị adị ugbu a).
Anyị abụọ n’ime ndị nna ochie (P. Property Torah, c):
Onye na-amụta site n'isi ya otu isiakwụkwọ ma ọ bụ otu halakah ma ọ bụ otu amaokwu ma ọ bụ otu aṅụ ọbụna otu akwụkwọ ozi kwesịrị ịkwanyere ya ùgwù n'ihi na anyị nyere Devid eze Izrel iwu onye na-amụtaghị ihe n'aka Ahitofel kama ọ bụ naanị ihe abụọ na-agụ ya rabaị ma mara. na ekwuru na ihe ọmụma ma ọ bụghị ihe dị mfe na ihe onwunwe na ihe David Melek Israel bụ onye na-amụtaghị n'aka Ahitofel kama ọ bụ naanị ihe abụọ gụrụ Rabbi Alufu na onye ọ maara nke na-amụta n'aka onye dere ya otu isi ma ọ bụ otu halakah ma ọ bụ otu amaokwu ma ọ bụ otu anu ọbụna. otu akwụkwọ ozi kwuru banyere ókè e kwesịrị ịkwanyere ùgwù na otú e kwesịrị isi sọpụrụ ma Tora kwuru, + Ilu XNUMX:XNUMX + Ndị amamihe na-asọpụrụ ga-eketa + Shem / Ilu / XNUMX Y + na ndị aka ha dị ọcha ga-eketa ihe ọma, ọ dịghịkwa ezi ihe ma e wezụga Tora. nke ahụ bụ + Shem / Ilu / XNUMXb
Ọzọkwa na BM Lag AA:
Ka Rabbanan: Rabbi onye kwuru - Rabbi onye mụtara amamihe, ọ bụghịkwa Rabbi onye mụtara Bible na Mishnah, okwu Rabbi Meir. Rabbi Juda kwuru, sị: Ihe niile nke amamihe ya ziri ezi. Rabbi Yossi na-ekwu: Ọ naghị eme ka anya ya pụta ìhè ma e wezụga n'otu mishnah - nke a bụ rabbi ya. Raba kwuru: Dị ka onye rabaị ngwa ahịa, Dasburn Zohma Listron.
Na na ọ bụ ihe kwesịrị ekwesị ka nwa akwụkwọ ihichapụ okwu nke nna ya ukwu, onye mmeri ya na onye maara ya?
Daalụ nke ukwuu maka ikwubiga okwu ókè otuto :). Ikekwe, m ga-esi ebe a nweta ihe mmụta iji kelee ndị rabaị ọtụtụ counters. Daalụ nke ukwuu maka nkuzi na akwụkwọ gị nke meghere m ụzọ n'ọtụtụ ebe, ma mee ka ihe ọmụma m dịkwuo mma n'ọtụtụ ebe ndị ọzọ, a ga m akpọ ya "ihe akaebe sitere na chocolate." mgbe ụfọdụ chepụtara ezumike maka mkpụrụ obi m.
Na kpọmkwem n'ihi nke a, achọghị m "ịkụzi Halacha" na rabaị. M tụrụ aro ka ihichapụ, ebe echere m na ọ ga-ezuru imezi akụkụ nke isiokwu ahụ ma ọ bụrụ na rabaị ahụ na ọ dabara adaba, ọ dịghịkwa mkpa ọdịdị nke nzaghachi ahụ n'onwe ya. Ọzọkwa, dị ka e kwuru, enwere m ahụ iru ala na-atụ aka na brush wavy maka njehie, ma ọ bụrụ na ọ bụ njehie.
N'ezie, ruo n'ókè m maara, ịkpọ okwu Latịn bụ n'ezie cicero (na Bekee nke oge a, ikekwe ndị na-eche echiche agbagọwo ya). Ajụjụ Devid na-eweta nsogbu ma a bịa n'aha a ma na ọ malitere mana omenaala dị iche iche jiri ya mee ihe dị iche, ma na-ebutekwa nsogbu n'iji aha ahụ eme ihe dị ka usoro mkpụrụedemede ma ọ bụ dị ka okwu na-eji ihe. ihe nakwa na ya pụtara. Ma ọ dị m ka aha Chitsro, ọ bụrụ n'ezie a ghọtara ya n'Izrel, adịghị achị, ọ dịghịkwa ebu ebubo omenala nke na iji cicero eme ihe agaghị aghọta ndị mmadụ ma ọ bụ na-anapụ ha ihe aha ahụ pụtara. . Ọ dịkwa m ka n'ihi iwu ntụgharị asụsụ anabatara taa a na-ebelata ojiji nke ụdị Tsizro.
Banyere ntụrụndụ ezi uche dị na ya, dị ka onye, ​​dị ka ekwuru, ga-enwekwa ekele maka akụkụ dị ukwuu nke ihe ọmụma m n'ọhịa nke mgbagha, enwere m olileanya na amụtala m nke ọma ka m wee ghara ịdaba n'ụdị dị otú ahụ. Echere m na a ga-ebipụta nzaghachi nke abụọ m na-akpaghị aka, mana amaghị m ụzọ ọ bụla ọzọ m ga-esi kwupụta ọchịchọ m ka ehichapụ nke mbụ, ewezuga nzaghachi ya, nke m kwuru na ekwenyeghị m na usoro ahụ bụ maka. ngwa ngwa mbipụta. Echere m na n'ikpeazụ onye tụkwasịrị ya obi ga-ahụ ha, na arịrịọ ihichapụ a kpọtụrụ aha na nso nso a.
ọzọkwa daalụ nke ukwuu.
Ọ bụ omenala nna m nwụrụ anwụ (bụ́ onye gụrụ Latịn) na otú e si akpọ aha bụ Tszero (na Siza). Ebe a kwa, bụ onye mmeri na onye rabaị maara ihe. 🙂
21 nke Shivat 02 - 2017/14/43 na XNUMX:XNUMX
Ị na-ekwu na ọ bụrụgodị na ị nwere ike wepụta nkwupụta uru sara mbara site n'otu usoro iwu, ị gaghị eji ya.
Mụ onwe m kwa, nwere (ruo n'ókè ụfọdụ ka na-ejide) echiche a, ma si otú ahụ adịghị eche na ọ dị mkpa ka echoes nke ethnocentrism ma ọ bụ chauvinism na-esi n'okpukpe ndị Juu (ọkwa, m bụ - na ruo n'ókè ụfọdụ ka m) na-eme nkọwa minimalism na-ekwu na e nwere. abụghị "okwu bara uru" na halakhah. Ọ dịghị nkwupụta na-ebilite ma ọlị - ọ bụghị nsogbu ma ọ bụ nke ziri ezi; ọnọdụ nyocha dịtụ).
Ma n'oge na-adịbeghị anya, adị m nro na m na-amata ụfọdụ okwu bara uru nwere ike ịdị na tiori (ịgọnarị ego mgbazinye ego, ọchịchọ maka ọchịchị eze, nguzobe nke Ụlọ Nsọ, ọchịchọ maka ndị niile na-edo onwe ha n'okpuru okpukpe ndị Juu n'ụwa), ya mere onye m maara dọọrọ uche m. n'eziokwu na Chee na Chineke chọrọ ka ị na-eme ihe, ọ bụ ezie na O nyeghị ya n'ụzọ doro anya iwu, gịnị mere na ị na-adịghị eme ya (ya bụ ihe abụọ agbanweela - 1. M ghọtara na a jọgburu onwe uru nkwupụta bịara 2. M kwenyesiri ike na na nkwupụta sitere na Shittin na-ejikọta).
Ọ bụrụ na ajụjụ ahụ bụ naanị banyere m, ege ntị m ntị, mana ndị rabaị anyị ekwenyelarị na uche Chineke dabere n'onwe ya iche na Torah - ọrụ nke ige ntị n'okwu ndị amamihe dị ka amara Ya ”(mgbe n'ikpeazụ. Hasbra bụ atụmatụ ime ka uche Chineke doo anya).
Ya bụ, mgbe m kwetara na uche Chineke bụ ihe na-adịgide adịgide, a na-arụrịta ụka na uche nke ndị amamihe - ọ dịkarịa ala na ịdọ aka ná ntị nke 'omume' (ọ bụghị n'echiche nke ụkpụrụ omume n'ezie, ma dị ka nzukọ omume) - bụ a na-ekekọta ihe n'ihi na dị nnọọ ka ha bụ ndị ọkachamara n'ịghọta Halacha na iguzosi ike n'uche Chineke.Na isi ya, ha na-eleghị anya ndị ọkachamara na ịghọta ihe uche Chineke bụ (nke a bụ ihe ndị ọzọ na akwụkwọ nke uto nke mitzvos na Rishonim karịa ndị Rishonim). Tannaim na Amoraim, ndị o doro anya na ha anwaghị ịghọta ozizi kama chọtakwa okwu ndị dị otú ahụ na nke bara uru).
Ma ugbua mkpụrụ obi m n'ajụjụ m - ị nwere ihe ngọpụ ịghara imezu uche Chineke dịka ekpughere ya n'anya gị site n'idebe Torah?
Ọ bụrụ na m nwere ike wepụta nkwupụta bara uru site na Torah ọ ga-atụ anya n'aka m. Nke a bụ uche Chineke ọ bụrụgodị na ọ bụghị Halacha n'ezie.
Mana nkwupụta uru sitere n'aka onye amamihe anaghị ejikọta ya. N'uche nke m, ndị amamihe abụghị ndị ọkachamara (ọ bụghị dịka i dere). Ikike nke ndị amamihe esiteghị n’eziokwu na ha ziri ezi, kama site n’eziokwu ahụ na anyị enwetawo ikike ha (lee Ks. Enwere ezigbo ihe kpatara nke a, mana ọ bụghị n'ihi na ha bụ ndị ọkachamara. Ma ugbu a, ị ga-aghọta na anyị anatala ikike ha na okwu halakhic mana ọ bụghị na meta-halakhic ma ọ bụ uru bara uru. Naanị ma ọ bụrụ na ha ekpebiela itinye ya na halakhah (dịka mmanye n'ogo nke nwoke na nwanyị na ndị ọzọ) ka ọ na-amanye anyị. N’ezie, ọ bụrụ na anyị ekweta na ha, anyị ga-eme otú ahụ, ma ọ bụrụ na ọ bụghị, ọ dịghị mkpa ime otú ahụ. N'ụzọ megidere nke ahụ, ọ dị mkpa ime ihe megidere ya kpọmkwem n'ihi na Hasbra nwere ọnọdụ njide.
Ma ihe uche Chineke na-achọ abụghị n'aka ndị isi nke yeshivot bụ ndị tọrọ ntọala ihe ma site Gemara na ndị mbụ niile, na ihe ndị bụ ochie. Ọ bụ ezie na e nwekwara mmejọ dị iche iche na nke a, wee hụ akụkọ ebe a na saịtị maka nkọwa: http://www.mikyab.com/single-post/2016/06/21/%D7%A2%D7%9C-%D7%A1%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%AA%D7%9F-%D7%95%D7%9E%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%9F-%D7%94%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%AA%D7%99
Na ihe mgbakwunye
25 Sivan 06 - 2019/15/38 na XNUMX:XNUMX
BSD XNUMX na Sivan A.T.
Na mkparịta ụka dị n'etiti ndị rabaị na isiokwu nke ịtọ ụbọchị maka ncheta Oké Mgbukpọ - lee isiokwu Rabbi Shmuel Katz, 'Mbibi na Ncheta' na 'Ụbọchị Oké Mgbukpọ nke Mbụ', na akwụkwọ Rabbi Yeshayahu Steinberger, Ọnya Tupu Ọgwụgwọ. Ha atọ na webụsaịtị 'Shabbat Supplement - Makor Rishon', yana nzaghachi m na akụkọ ndị dị n'elu.
24 Kislev 12 - 2019/12/23 na XNUMX:XNUMX
M ga-arịọ mgbaghara n'ọdịnihu m na-agụ ọdịnaya dị na saịtị a maka oge mbụ na amaghị m ma ajụjụ m ma ọ bụ azịza ha apụtawo na akụkọ ma ọ bụ na ajụjụ ndị zara ajụjụ ebe a.
1. Ọ bụrụ na ị chere na Chineke akwụsịla itinye aka n'ihe na-eme n'ụwa anyị, ị nwere ike ịkọwa na nkenke echiche ndị bụ isi na okpukpe ndị Juu dị ka.
B. Ụgwọ ọrụ na ntaramahụhụ - Ọ dị m ka Maimonides (m na-ede site na ebe nchekwa ọ bụghị site na nyochaa n'akwụkwọ) na-ekwu na a na-eduzi usoro okike nke ụwa n'ihi àgwà nzuzo nke ndị Juu dị ka na m nyere gị. mmiri ozuzo n'oge, wdg.
2. Ị chere na ikpe ekpere ugboro 3 n'ụbọchị aghọọla ihe na-adịghị mkpa n'ihi na ọ dịghị onye ga-ekwurịta okwu? Ihe niile fọdụrụ bụ ụgwọ halakhic nke a chụpụrụ na ikekwe ọ bụ isi ihe kpatara ịjụ mkpa gị n'aka onye nwere ike inye ha?
Ọ ga-ekwe omume ịhapụ Rosh Hashanah nke onye ọ bụla nọ n'ụwa na-agafe n'ihu ya dị ka ụmụ Meron?
4. Ọ na-asọpụrụ ya na-eche na m na-adịghị bu n'obi tụnyere Khu dị ka na-ekwu na ndị chere na Shiva gara hie ụra? Ma ọ bụ hapụ ụwa ya?
Ọ bụrụ na atụleworị ihe na saịtị ahụ, m ga-enwe obi ụtọ ịkwado maka ntụaka maka ebe ndị dị mkpa ma ọ bụrụ na oge gị anaghị ekwe ka ị kwuo okwu.
24 Kislev 12 - 2019/17/22 na XNUMX:XNUMX
Ị na-ajụ ọtụtụ ajụjụ sara mbara ma ọ siri ike ịza ebe a. Ị ga-ahụ nkuzi m niile na isiokwu ndị a na isiokwu ndị ọzọ na trilogy ọhụrụ, na n'isiokwu ndị a n'akwụkwọ nke abụọ (Ọ dịghị Man Is Ruler in the Spirit). E wezụga nke ahụ, ị ​​nwekwara ike ịchọ saịtị ebe a wee chọta ọtụtụ ntụaka na nke ọ bụla n'ime ajụjụ ndị a.
Onye Juu a dọọrọ n'agha
We na Tammuz 25 - 06/2020/15 na 19:XNUMX
1) Banyere anọghị n'otu na ọchịchị Maimonides na ihe ndị yiri ya, ọ dịghị ihe jikọrọ ya na meta-halakhah, ma nkọwa nke halakhah ka a na-eji usoro ụfọdụ eme ya ma ọ bụghị ihe jikọrọ ya (ma eleghị anya ọ nwere ike ịbụ). kwuru na ọ bụchaghị ihe jikọrọ ya).
Dịka ọmụmaatụ: "AR Acha Bar Hanina na-ahụ anya ma mara ya n'ihu onye kwuru na ọ bụ ụwa na ọ dịghị onye ọ bụla n'ime ọgbọ Rabbi Meir dị ka ya na ihe kpatara na ha eguzobeghị otu halakhah dị ka ya na ndị enyi ya enweghị ike iguzo n'elu. njedebe nke echiche ya na ọ na-ekwu banyere adịghị ọcha dị ọcha ma na-egosi ya ihu Anyị na-ahụ na ọ bụ ezie na ndị maara ihe maara na onye rabaị maara ihe (ma eleghị anya ziri ezi n'ime ha) achịghị na halakhah dị ka ya.
Nakwa n'otu ibe ahụ (Eruvin XNUMX :) a na-enye ihe kpatara ya na a na-asọpụrụ Halacha n'agbanyeghị na Shabash na-amụba Tapi na ọ bụ n'ihi ịdị umeala n'obi ha na ọ dịghị ka m na onye ọ bụla na-eche na ịdị umeala n'obi na-edugakarị n'eziokwu. eziokwu (n'agbanyeghị na ọtụtụ oge ee Ihe na-adị nkọ ma doo anya).
N'uche nke m, o doro anya na ndị na-eche echiche (n'adịghị ka ndị na-ekpe ikpe ...) nke halakhah gara n'ụzọ doro anya na nke na-agbanwe agbanwe, ka e mesịrị, anyị hụrụ ọtụtụ n'ime ha bụ ndị na-adịghị achị dị ka ha na naanị na ole na ole ikpe ka ha na-achị. dị ka ha. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, enweghị ihe ọ pụtara na nkwupụta ahụ na Maimonides enweghị nkwekọ meta-halakhic n'ihi na enwere ihe ọ pụtara na ikpe nke meta-halakhic.
2) Onye rabaị ahụ kpebiri n’ihi ihe ụfọdụ na ọrụ ebube bụ na o nweghị ihe ga-ekwe omume ịbụ onye na-enweghị enyemaka. Ebee ka i si nweta nkọwapụta a?
Ihe dị ịtụnanya nke echiche dị otú ahụ bụ na onye ọ bụla nke jiworo Bible n'aka ya doro anya na n'agbanyeghị ọrụ ebube nile n'ebe ahụ, ha mehiere mmehie na nnupụisi (dị ka rabaị si kwuo n'oge ọrụ ebube mere) na ọ bụrụ na anyị na-ekwu ọrụ ebube. bụ ihe na-enweghị ike ime mgbe ahụ anyị kwuru na ndị ọgbọ niile bụ ụyọkọ ndị nzuzu (Don Ku na ihe taa iri puku kwuru iri na-echegharị n'ihi "ọrụ ebube" nke Baba na charlatans na ọbụna karịa ndị e nwere okpukpe ndị na-adịghị emehie maka. egwu ntaramahụhụ nke na-ahụghị site na ha Ku nwa Ku nwa ndị n'oge ahụ na-abụghị ndị mmehie)
Echere m na ọrụ ebube bụ ihe gbasara ọnụ ọgụgụ dị ala nke na-eme na ya mere enwere oghere maka ndị na-agọnahụ (ọbụlagodi n'oge ndị amụma) na-ekwu na nke a bụ ihe okike na ọ bụghị ọrụ ebube. Dika nka si di, ayi nwe-kwa-ra ọb͕ọ-ayi n'ọb͕ọ-ayi. (Amaara m nsogbu dị na nkwupụta a, n'ihi na ọ na-apụta na na ọganihu nke sayensị, ihe ndị a na-ewere dị ka ogbako n'ihi na a na-ewere na ha adịghị ike taa, anyị ga-amata na ha kwadoro. Ma a ka nwere ọtụtụ ihe - mgbe ndị mmadụ na-alaghachi n’ala nna ha
3) Rabi ahụ dere “Ma echeghị m na ha abanyela n'ime omimi nke ihe ọ pụtara. Nzube nke rabaị bụ ịsị na ọ bụ onye Zayọn nke ụwa, dị ka Ben-Gurion. "
Ekele anyị na-ekele onye rabaị maka itinye ọchị na ihe ọchị kwụ ọtọ n'okwu ya. Ọ na-eme ka ọgụgụ ahụ dị nro….
(Ekwetaghị m na ị kwenyere na nke a).
We na Tammuz 25 - 06/2020/15 na 28:XNUMX
Aga m agbatịkwu ihe niile ị dere ebe a n'ebe dị iche iche.
1. Anaghịzi m echeta ihe ọ na-ekwu (kedu ihe na-abụghị otu). Mana gbasara ikpe nke Knesset, ekwuru m otu oge dị ka ihe akaebe na halakhah abụghị eziokwu mgbe niile kama ọ nwere uru nnwere onwe (ịchịa dịka m ghọtara ọbụlagodi na n'uche m nke a abụghị eziokwu). Banyere BS na BH, ndị nkọwa kewara na nke a. R.I. Karo na iwu Gemara na-akọwa na ịdị umeala n'obi ha na-eduga ha n'eziokwu (n'ihi na ha buru ụzọ tụlee okwu B'Sh tupu ha emepụta ọnọdụ nke ha) agbatịwo m nke a na Tuba n'amaokwu ole na ole.
2. Na nke a, m agbatịwo Tuba na akwụkwọ nke abụọ na trilogy (nakwa ebe a na saịtị n'ọtụtụ ebe). Ọ dịghị anụmanụ dị ka ọrụ ebube n'ime okike. Onye ọ bụla kwuru nke ahụ gbagwojuru anya.
3. Ọ bụghị naanị na m kwenyere ma m kwenyesiri ike. Onye rabaị si Ponivez bụ onye Zayọn na-anaghị akwụwa aka ọtọ.
Na-emegide nzuzu Gbanye Nbili na ọdịda nke Bennett na ihe ha pụtara (Osisi 486)
Yerachmiel Gbanye Azịza nye otu ndị Arab na gọọmentị
Henri Bergson Gbanye Azịza nye nnukwu udo
Ọnye na-bụ hitchhiker? Gbanye Nbili na ọdịda nke Bennett na ihe ha pụtara (Osisi 486)
Juda h Gbanye Iran ọ nọ ebe a? Na Ọganihu na Ọdịmma Liberalism (Column 483)